အကြိုးအမွတျ – My Blog
မမ .. ဓါတျပုံရိုကျတာတော့ ဟုတျပါပွီ .. ဒါပမေယျ့ .. ကနြေျာ့ အလုပျက ..” “နိုး .. နိုး .. စိတျမပူနဲ့ .. ဇှဲ .. မမတာဝနျယူတယျ .. မငျးရဲ့ဘော့ဈ မငျးကို လကျညိုးနဲ့တောငျ မထိစရေဘူး” ရဲရဲကွီး အာမခံနသေော ဒျေါနနျးယမုံကွောငျ့ ဇှဲ ပုခုံးတဈခကျြသာ တှနျ့ပွလိုကျသညျ။ ဟုတျသညျလေ။ သူမက ဒီလိုပွောမှတော့ ဘာဂရုစိုကျစရာ လိုနသေေးသနညျး။ နောကျပွီး အခုအခွအေနတှေငျ အလုပျပွုတျမညျ့ကိစ်စထကျ မမဟု သူမကိုယျသူမ သုံးနှုနျးနသေော ဒျေါနနျးယမုံ .. လကျစားခရြေနျဆိုသော ခေါငျးစဉျနှငျ့ ဘယျလောကျအထိ လုပျဆောငျခငျြသညျ့အခကျြကို ပိုစိတျဝငျစားနမေိသညျ။ “ဟုတျကဲ့ .. ဒါဆို … ကနြျောတို့ ဘယျလိုဆကျလုပျကွမှာလဲ ..” “အငျး .. ဟုတျသားပဲ … ဒီလိုလုပျမယျ .. တို့နှဈယောကျ ဖကျထားတာနဲ့ စကွတာပေါ့” “အိုကေ .. မမ” ဒျေါနနျးယမုံ ပေးလိုကျသော ကငျမရာကို ထိုငျရာမှ ထ၍ လှမျးယူလိုကျသညျ။
ဇှဲနှငျ့ နနျးယမုံ .. ဦးမိုးလုံးဟိနျး၏ ခနျ့ညားလှသော ရုံးခနျးအတှငျးမှ သဈလှငျလှသော စားပှဲကွီး၏ အစှနျးတှငျ အတူတူရပျမိသှားသညျ။ နနျးယမုံတော့ ဘယျလိုနသေညျ မသိ .. ဇှဲကတော့ ရငျဘတျထဲတှငျ ကုလားဘုရားပှဲ လှညျ့နသေလိုကို ခံစားနရေသညျ။ အဲယားကှနျးအသံ တိုးတိုးလေးသာ မွညျနသေော အလုံပိတျရုံးခနျးထဲတှငျ သူ့ရငျခုနျသံ တဒုနျးဒုနျးက အတျောပငျ ကယျြလောငျလှသညျ။ နနျးယမုံ ကွားသှားမှာတောငျ စိတျပူရသညျ။ “ဒီလောကျဆို ရမလား .. မမ” ကငျမရာကိုငျထားသော ညာလကျကို ဆနျ့ထုတျပွီး ဆယျဖီရိုကျလို့ရအောငျ ဇှဲ ပွငျလိုကျသညျ။ ရငျသားထှားထှားတှေ မို့တကျလာသညျအထိ နနျးယမုံက အသကျကိုရှူလိုကျရငျး ဇှဲအနားသို့ တိုးကပျလာသညျ။ သငျးပြံ့သော အကောငျးစား ရမှေေးနံ့က စောစောကထကျ ပို၍ နီးကပျစှာ ဇှဲထံပါးသို့ ရောကျရှိလာသညျ။ “ရပွီ .. ရိုကျတော့” ကိုယျခငျြးထိကပျသှားမှုနှငျ့အတူ သူ့ခါးကို လာဖကျလိုကျသညျ့ နနျးယမုံကွောငျ့ လကျမွှောကျကိုငျထားသော ကငျမရာဘကျကို ဇှဲ ကွညျ့နဖေို့ သတိမသှေ့ားသညျ။
နီးကပျလာသညျ့ မကျြနှာဖူးဖူးလှလှလေးအား ယောငျယမျး၍ ငေးမိသှားပွီးနောကျ ကငျမရာခလုတျကို ကိုငျထားသော လကျညိုးက အလိုအလြောကျ နှိပျမိသှားသညျ။ “ကလဈ” “ရိုကျပွီးပွီလား .. ပွဦး” သူ့လကျထဲမှ ကငျမရာကို ဆှဲယူသှားတော့ ဇှဲ ယောငျတောငျတောငျနှငျ့ ပေးလိုကျ၏။ နနျးယမုံ ဗီဒရိုမကျြနှာပွငျ ကို အာရုံစိုကျနခြေိနျတှငျ ဘေးစောငျးအနအေထားနှငျ့ မွငျနရေသော သူမအား ခိုးကွညျ့မိသညျ။ ဇှဲက နနျးယမုံထကျ စာလြှငျ ခေါငျးတဈလုံးစာလောကျ အသာလေး မွငျ့နလေရော၊ ဖြဲသီး (ဖရဲသီး) လို့ တငျစားချေါဆိုလို့ရမညျ့ ရှရေငျထှားထှားတှေ၏ အထကျပိုငျးကို အသကျရှူမှားဖှယျ မွငျနရေသညျ။ “အဆငျမပွသေေးဘူး .. ဇှဲ .. ဒီလောကျနဲ့တော့ မမတို့နှဈယောကျက အတှဲနဲ့ တူမနဘေူး ..” “ဒါ .. ဒါဆို .. ဟိုလေ .. ကနြျောတို့ နှဈယောကျ နမျးနတေဲ့ ပုံဆိုရငျကော” ခြောခြောငယျနှငျ့တုနျးက အဖွဈအပကျြကို ပွနျစဉျးစားမိသညျ့ ဇှဲ .. အရဲစှနျ့ကာ ပွောလိုကျသညျ။ နနျးယမုံက ကွညျလငျလှသညျ့ မကျြဝနျးနကျနကျလေးမြားနှငျ့ သူ့ကို အခုမှ မွငျဖူးသညျ့ လူတဈယောကျလို စိုကျကွညျ့သညျ။
ဇှဲ ရငျထဲ ရှိရှိသမြှ တနျခိုးရှငျတှကေို တမိပွနျသညျ။ စက်ကနျ့ပိုငျးလောကျ အခြိနျကွာသှားတော့မှ ဇှဲ အဆိုကို လကျခံသညျ့နှယျ နနျးယမုံ ခေါငျးလေးညိတျပွသညျ။ သူမလကျထဲ ကိုငျထားသော ကငျမရာကို ဇှဲအား ပွနျပေးလိုကျသညျ။ နှဈဦးသား ကိုယျခငျြး ပွနျပူးကပျသှားသညျ။ ဒီတဈခါတော့ ပထမတဈခါလို ဘေးတိုကျအနအေထားနှငျ့ မဟုတျဘဲ တဈဦးနှငျ့တဈဦး မကျြနှာခငျြးဆိုငျ အနအေထားနှငျ့ ဖွဈသညျ။ ဇှဲတဈယောကျ စိတျလှုပျရှားနသေလို၊ သူ့ကံကွမ်မာကိုလညျး အံ့သွမိသညျ။ ဤဘဝတဈသကျတာတှငျ ဘော့ဈရဲ့ သရဖူမယားဖွဈသူ ဒျေါနနျးယမုံအား နမျးရလိမျ့မညျဟု ဘယျတုနျးကမှ ထငျမထားခဲ့ပါ။ ဇှဲ၏ ခေါငျးက ရှတေို့းရငျး ငုံ့ကသြှားသလို၊ နနျးယမုံ၏ မကျြနှာလေးက မျောပေးရငျး ရှသေို့ တိုးလာသညျ။
ခွတေဈလှမျးခငျြး တိုးလှမျးလိုကျကွသညျ့ သူတို့နှဈယောကျစလုံး .. မကျြနှာခငျြး မထိခငျ နနျးယမုံ၏ မောကျထှကျနသေော ရငျဆိုငျတှနှေငျ့ ဇှဲရငျဘတျ အရငျဦးဆုံး ပှတျတိုကျမိသညျ။ ထို့နောကျမှ နှဈဦးသား နှုတျခမျးမြား ဖွညေငျးစှာ ထိတှသှေ့ားသညျ။ (အငျး) စိတျလှုပျရှားလှနျးလို့ လညျခြောငျးထဲက လြှံထှကျလာသော ညညျးသံကို အပွငျမရောကျအောငျ ဇှဲ တျောတျောထိနျးလိုကျရသညျ။ ကငျမရာကိုငျထားသော တုနျယငျနသေညျ့ လကျအား ငွိမျအောငျ ကွိုးစားပွီး ဓါတျပုံတဈပုံကို မွနျမွနျရိုကျလိုကျသညျ။ ကလဈဆိုသော အသံကွားတော့ နနျးယမုံက နောကျသို့ အမွနျပွနျဆုတျသညျ။ သူတို့နှဈယောကျ လူခငျြး ပွနျကှာသှားသညျ။
“ပွပါဦး .. မမကို” “ဟုတျ” ကငျမရာကို ယူလိုကျသညျ မဟုတျဘဲ ဇှဲဘေးနားကနသော လှမျးကွညျ့သဖွငျ့ သူတို့နှဈယောကျ လူခငျြးပွနျပူးသညျ။ ဇှဲ ကိုယျ့ကိုကိုယျ သတိပေးရငျး ဗီဒရိုမကျြနှာပွငျ ကိုသာ နနျးယမုံကွညျ့သလို လိုကျကွညျ့သညျ။ တကယျကို သူနှငျ့ နနျးယမုံ နှုတျခမျးတှကေ ထိတှပေူ့းကပျနသေညျ။ သို့သျော တဈခုခု လိုအပျနမှေနျး ကွညျ့လိုကျတာနှငျ့ သိသာနပွေနျသညျ။ “ဆိုးတော့ မဆိုးဘူး .. ဒါပမေယျ့ ဒီလောကျနဲ့ ဒငျးတို့ ဂြဲလကျဈ မဖွဈလောကျဘူးနဲ့ တူတယျ .. မမတို့ ပိုပွီး ပကျဈရှငျ လိုမလား မသိဘူး” “ဟုတျတာပေါ့ မမ” “ဒါဆို .. ထပျစမျးကွညျ့ရအောငျ” ဒီတဈခါတော့ ဇှဲတဈယောကျ နောကျတှနျ့မနတေော့ပါ။ စောစောတုနျးကတော့ ဒျေါနနျးယမုံကို သူဌေးကတျောဆိုသော အရှိနျအဝါနှငျ့ ရှိနျနခေဲ့သညျ။
အခုတော့ ဇှဲ စိတျထဲတှငျ ဒီအတှေးတှေ မရှိတော့ပါ။ သူ့ကံ ဘယျလောကျ ထပျကောငျးနိုငျဦးမလဲဆိုတာကို လကျတှေ့ စမျးခငျြလာသညျ။ နနျးယမုံ အနားတိုးလာသညျတှငျ သူကပငျ လကျဦးအောငျ သူမခါးလေးအား လှမျးဆှဲပွီး နှုတျခမျးတှကေို သာသာလေး ဖိနမျးပဈလိုကျသညျ။ ခြိုမွသငျးရီသော အနမျး၏ အရသာက နနျးယမုံ၏ နှုတျခမျးမြားမှ တဆငျ့ ဇှဲ ကိုယျထဲသို့ စီးဆငျးသှားသညျ။ ရငျခှငျထဲ ရောကျနသေော နနျးယမုံ၏ ကိုယျလေးက တောငျ့တောငျ့လေး ဖွဈနသေညျဆိုတာကို ဇှဲ သတိထားမိသညျ။ နှုတျခမျးထောငျ့တှနျ့ကာ မခိုးမခနျ့ပွုံးလိုကျပွီး ထိကပျထားသော နှုတျခမျးနှဈခုကွားတှငျ သူ့လြှာလေးအား ထိုးထညျ့လိုကျသညျ။ “အငျ” ဆိုသော အသံလေး ကွားလိုကျရပွီး သူ့လြှာက နနျးယမုံရဲ့ နှုတျခမျးလှာနှဈဖကျကို ဖွတျသနျးပွီး ပါးစပျလှလှထဲ ရောကျသှားသညျ။ နနျးယမုံ ကိုယျကလေး ဆတျခနဲ တုနျသှားပွီး ဇှဲ၏ ရငျခှငျထဲမှ ရုနျးထှကျသညျ။
အလိုကျသငျ့ပငျ သူလှတျပေးလိုကျသညျ။ သို့သျော နှုတျခမျးခငျြး မကှာသေးခငျ သူမလြှာလေးအား သူ့လြှာနှငျ့ တဈခကျြရအောငျ လှမျးပှတျဆှဲလိုကျသညျ။ “ရ .. ရပွီထငျတယျ” အနညျးငယျ အသကျရှူမမှနျသညျ့ အသံနှငျ့ နနျးယမုံ ဇှဲအား လှမျးပွောသညျ“နမျးတာတော့ ရပွီ .. မမ ဘာဆကျလုပျမှာလဲ” ကငျမရာ စကရငျထဲက အရအမိ ရိုကျထားသော ပုံကို ဇှဲ လှမျးပွသညျ “မမ မပွောတတျဘူး .. ဇှဲ” နနျးယမုံ၏ မကျြလုံးတှကေ စိတျရှုပျထှေးဟနျနှငျ့ မတညျမငွိမျ ဖွဈနရှောသညျ။ သူမကို လိုကျကွညျ့နသေော ဇှဲကိုတောငျ တနျပွနျ မကွညျ့နိုငျရှာ။ နနျးယမုံ၏ အကွညျ့က စားပှဲပျေါတှငျ တငျနသေော ဓါတျပုံမြားကို ငေးကွညျ့သှားမိသညျ။
ထိုခဏတာအတှငျး သူမ မကျြဝနျးထဲတှငျ အရောငျမြိုးစုံ လငျးလကျသှားသညျ။ “မမ စိတျမဆိုးဘူးဆိုရငျ ကနြျော အကွံတဈခုပေးမယျ .. ” “ပွော .. ဇှဲ .. ဘာလဲ ??” “မမ ဝတျစုံရဲ့အပျေါပိုငျးကို ခန ဖယျလိုကျပါလား” ဒီစကားကွောငျ့ နနျးယမုံ၏ လကျက သူ့ပါးပျေါ ဖွောငျးခနဲ ကလြာမလားဟု ဇှဲ ရငျတထိတျထိတျနှငျ့ စောငျ့ကွညျ့နလေိုကျသညျ။ သို့သျော သူထငျသလို မဖွဈပါ။ နနျးယမုံ၏ ပုံစံက တှဝေတှေနျ့ဆုတျနဟေနျသာ ရှိသညျ။ မထူးတော့သညျ့အဆုံး ဇှဲလညျး ဆေးတဈလုံးလောကျ ထပျထိုးပေးလိုကျသညျ။“ဘော့ဈနဲ့ ခြောခြောငယျတို့ကို ပိုပွီး ဆှဆှေ့ခေု့နျတဲ့အထိ ဒေါသထှကျစခေငျြတယျဆိုရငျတော့ နမျးတဲ့အဆငျ့ထကျ ပိုမှ ဖွဈမယျ .. မမ” ဇှဲ၏ ဒီစကားက တျောတျော တာသှားပါသညျ။
အထူးသဖွငျ့ ဘော့ဈနှငျ့ ခြောခြောငယျဆိုသော အသုံးက နနျးယမုံ၏ စိတျကို ဆှပေးလိုကျဟနျရှိသညျ။ တဈခုခုကို ဆုံးဖွတျလိုကျဟနျနှငျ့ ခေါငျးကို ဆတျခနဲ ညိတျပွရှာသညျ။ “ဟုတျတယျ .. မငျးဘော့ဈက မမ ရငျသားတှကေို သိပျကွိုကျတာ .. တခွား ယောကျြားတဈယောကျသာ ဒါတှကေို ထိတှနေ့တေယျဆို သခြောပေါကျ ဒေါသထှကျလို့ နရောမှာတငျ နှလုံးရပျသှားနိုငျတယျ .. ကောငျးပွီလေ .. မငျးပွောသလို လုပျကွတာပေါ့” လှနျခဲ့တဲ့ ဆယျနှဈလောကျကသာ ဒီစကားကို ဇှဲကွားမညျဆိုလြှငျ ပြျောလှနျးလို့ ထပဲခုနျမိမလား၊ နောကျကြှမျးတှဘောတှပေဲ ထိုးမိမလား မသိ။ အခုတော့ ရငျထဲအပြျောစိတျကို မကျြနှာပျေါ တကျမလာအောငျ မနညျးထိနျးနရေသညျ။ ထိုသို့ မိမိခံစားခကျြကို ရုပျတညျကွီးနှငျ့ ထိနျးသိမျးရသညျမှာလညျး ကွီးစှာသော ဒုက်ခဆိုသညျကို စာဖတျသူလညျး ဇှဲနရောရောကျလြှငျ နားလညျနိုငျပါလိမျ့မညျ။ ဇှဲတဈယောကျ နရောကနေ တုတျတုတျမြှကို မလှုပျမိပါ။
သခြောသာ ကွညျ့လြှငျ သူ့တကိုယျလုံးတှငျ လှုပျရှားနသော အရာသညျ နနျးယမုံ၏ လကျကလေးမြား လှုပျရှားရာသို့ ထပျခပျြမကှာ လိုကျကွညျ့နသေော မကျြဝနျးမြားသာ ရှိနပေသေညျ။ လညျတိုငျကြော့ကြော့တှငျ ပတျထားသော ပုဝါ ၏ အစနှဈဖကျကို ဖွုတျလိုကျသညျနှငျ့ ရငျသားမို့မို့မြားအား စညျးနှောငျထားသော အဖွူရောငျဘရာက အပွငျကို ထငျးထငျးလငျးလငျးပငျ ထှကျလာသညျ။ နနျးယမုံသညျ ခတျေမှီလှနျးလှသညျကို ဒီနရောတှငျ ဇှဲ တှလေို့ကျရသညျ။ သူမ ဝတျထားသော ဘရာသညျ ဇာလှာမြားဖွငျ့ ဖနျတီးထားသော ပုံဆနျးဘရာမြိုးဖွဈသညျ။ ဘရာတဈခုလုံးတှငျ ဇာလှာမြားက အမြားစု ဖွဈသဖွငျ့ နို့လုံးဖှေးဖှေးတှကေို အတိုငျးသား မွငျနရေသညျနှငျ့ မခွားပါ။ နို့သီးခေါငျးလေးမြားကို မမွငျရသညျ့တိုငျ ပနျးနုရောငျ နို့ကှငျးဝိုငျးလေးမြားကိုတော့ ရိုးတိုးရိတျတိတျ မွငျနရေသေးသညျ။ “ဝိုး !!” (အံ့သွမှုကို မထိနျးနိုငျဘဲ ဇှဲ ရရှေတျမိသှားသလို၊ လကျထဲကိုငျထားသော ကငျမရာ၏ ခလုတျကိုလညျး ကလဈခနဲ မွညျအောငျ နှိပျမိသညျ) “ဝိုး လုပျမနနေဲ့ … ဇှဲ .. လကျနဲ့ကိုငျထားတဲ့ ဓါတျပုံ မွနျမွနျလာရိုကျ” ဘာပွောကောငျးမလဲ။
ဒါမြိုးတော့ ဇှဲတို့အတှကျ နှဈခါပွနျ ဖိတျချေါနစေရာမလို။ မသိမသာတုနျနသေော လကျတှနှေငျ့ပငျ ရငျသားဖှံ့ဖှံ့ထှားထှား တဈဖကျကို ဘရာပျေါကနေ လှမျးကိုငျလိုကျသညျ။ ကွီးမားသလောကျ အိစကျနှေးထှေးသညျ့ အထိအတှကေ့ သူ့လကျဖဝါးပွငျပျေါသို့ ကူးစကျကာ ရောကျလာသညျ။ နနျးယမုံ၏ နို့လုံးကွီးတဈဖကျကို ကိုငျထားရငျး ဇှဲ ကနျြသညျ့လကျတဈဖကျနှငျ့ ဓါတျပုံတှေ တဖွတျဖွတျ ရိုကျသညျ။ စိတျထဲမှလဲ ဘာဖွဈလို့ ဘော့ဈက ကငျမရာထောကျတံကို သိမျးမထားတာလဲဟု လှမျးအပွဈတငျလိုကျသေးသညျ။ ထောကျတံသာ ရှိလြှငျ ကငျမရာကို အျောတိုခြိနျထားလိုကျယုံသာ၊ ဒါဆို သူ့လကျနှဈဖကျစလုံးနှငျ့ ဖြဲသီးအရှယျရှိသညျ့ နို့လုံးဖှေးဖှေးကွီးတှကေို အားရပါးရ ကိုငျတှယျလို့ရမှာဖွဈသညျ။
နနျးယမုံ၏ နို့လုံးတှကေလညျး တကယျကို သဘောကခြငျြစရာကောငျးပါသညျ။ ဇှဲ၏ လကျတဈဖဝါးတောငျ ကောငျးကောငျး မအုပျနိုငျခငျြ။ နူးညံ့မှုနှငျ့အတူ အိတငျးမှုကလညျး ထပျတူတှဲ၍ ရှိနသေညျ။ တျောတျောတော့ ဖျောပွရခကျသော အတှဖွေ့ဈသညျ။ သို့သျော ထိုအတှကေ့ တပျမကျမောဖှယျရာ အပွညျ့လညျး ဖွဈနသေဖွငျ့ ဇှဲတဈယောကျ ကိုငျထားလကျြက မသိမသာပငျ ညှဈမိသှားသညျ။ နနျးယမုံ ကိုယျက တှနျ့သှားပွီး ဘရာပျေါက သူ့လကျကို ဖယျထုတျလိုကျသညျ။ “ဓါတျပုံတှပွေဦး .. ဇှဲ” မလှတျခငျြလှတျခငျြနှငျ့ လှတျပေးလိုကျရသညျ့ ဇှဲ .. ကငျမရာကို ထိုးပေးလိုကျသညျ။ နနျးယမုံက ကငျမရာကို ကွညျ့နခေိုကျ၊ သူ့မကျြလုံးတှကေမူ နို့လုံးအိအိကွီးတှထေံပါးမှ တဈခကျြကလေးမှ မလှဲ။ မကျြတောငျတောငျ ခတျမိရဲ့လား မသိ။ ကငျမရာကို ဇှဲလကျထဲ ပွနျပေးလိုကျပွီးနောကျ နနျးယမုံက အလုပျစားပှဲကွီးနားသို့ ကပျသှားသညျ။
ဝတျစုံ၏ အပျေါစနှဈစကိုလညျး လညျတိုငျမှာ ပွနျပတျလိုကျရာ ဇှဲ အလှနျအမငျး တပျမကျနသေော ရှရေငျဖှေးဖှေးကွီးတှကေ သူ့မွငျကှငျးမှ ပြောကျသှားသညျ။ ကလေးငယျတဈယောကျ သကွားလုံးဗူးပြောကျသှားသလို ဇှဲ ခံစားလိုကျရသညျ။ ဟုတျသညျလေ။ ဒီအလုံးဖှေးဖှေးကွီးတှကေို အားရပါးရမှ မနယျရသေးတာ ..။ “ကြ .. ကနြျောတို့ ပွီးပွီလား မမ” မနနေိုငျတော့သညျအဆုံး သူ့ကို ကြောပေးကာ ထားသညျ့ နနျးယမုံကို နောကျကနေ လသေံတိုးတိုးလေးနှငျ့ မေးမိသညျ။ နနျးယမုံက ဇှဲကို ခကျြခငျြး ပွနျအဖွမေပေးပါ။ စားပှဲပျေါတှငျ ရှိနသေော ဦးမိုးလုံးဟိနျးတို့အတှဲ၏ ဓါတျပုံတှကေို စူးစိုကျကွညျ့နသေညျ။
တအောငျ့နမှေ “မပွီးသေးဘူး .. ပွီးဖို့ အဝေးကွီးလိုသေးတယျ .. ဇှဲ” “….” “ဇှဲ .. အဲဒီ ကငျမရာနဲ့ မူဗှီရိုကျလို့ရလား” “ရတယျ .. မမ” (နနျးယမုံ စိတျထဲတှငျ ဘာတှေးနသေညျကို ဇှဲ မခနျ့မှနျးမိပမေယျ့ ခကျြခငျြးခေါငျးညိတျကာတော့ အဖွပေေးလိုကျသညျ) “အိုကေ .. ကောငျးတယျ .. ဒါဆို အခုစပွီး ရီကော့လုပျလိုကျ” ပွောပွီးသညျနှငျ့ နနျးယမုံက ဇှဲရှသေို့ လြှောကျလာသညျ။ သူမဘာလုပျမှာလဲဆိုတာ မသိခငျမှာပငျ သူ့ရှတှေ့ငျ ဒူးထောကျ၍ ထိုငျခလြိုကျသညျကို တှရေ့သညျ။ အံ့အားသငျ့ပွီး ဇှဲ ငုံ့ကွညျ့မိခိုကျ နနျးယမုံ၏ သှယျပွောငျးသော လကျတဈစုံက ဘောငျးဘီခါးပတျခေါငျးအား လှမျးကိုငျလိုကျသညျ။
“မ .. မ .. ဘာလုပျမလို့လဲ” “မေးမနနေဲ့ … မငျး .. မငျးကောငျမ အတှကျ ပွနျတုံ့ပွနျခငျြတယျ မဟုတျဘူးလား” “အာ .. ဟုတျ … အိုကေ” ကငျမရာကို ကိုငျထားရငျးနှငျ့ ဇှဲ ငွိမျငွိမျသကျသကျ ရပျပေးနလေိုကျသညျ။ လှုပျရှားစရာ ရှိသမြှ နနျးယမုံကသာ ဦးဆောငျ၍ ပွုလုပျသညျ။ ဘောငျးဘီက သူ့ခွရေငျးတှငျ ပုံသှားသောအခါ နနျးယမုံလကျက ဖောငျးဖောငျးကွီးဖွဈနသေော အတှငျးခံဆီသို့ ရောကျလာသညျ။ ဇှဲ .. ကငျမရာကို ဗှီဒီယိုသို့ ပွောငျးလိုကျပွီး စတငျ ရိုကျကူးသညျ။ အရငျဆုံး ကငျမရာမွငျကှငျးထဲတှငျ ပျေါလာတာက ဖွူဖှေးသှယျတနျးသော လကျကလေး၊ ထိုလကျကလေးရဲ့ လကျသူကွှယျနရောတှငျတော့ တလကျလကျတောကျနသေော စိနျလကျစှပျ .. နနျးယမုံရဲ့လကျထပျလကျစှပျ၊ ဖောငျ့ဖယောငျးပမာ လှပသော သူမရဲ့လကျခြောငျးကလေးမြားနှငျ့ ထိစပျနသေညျက အတှငျးခံဘောငျးဘီအောကျက သူ့လီးကွီး။ ဇှဲတဈယောကျ နားထငျတှေ ရှိနျးခနဲ ဖွဈလာသညျအထိ ခံစားလိုကျရသညျ။
“အိုး .. အမေ့ !!” ယောကျြားတှေ၏ လိငျအင်ျဂါနှငျ့ ပတျသကျပွီး နနျးယမုံ မညျမြှ အတှအေ့ကွုံရှိသညျတော့ မသိ။ သူ့လီးအား ဘောငျးဘီကွိုးကို ဖယျ၍ ဆှဲထုတျလိုကျသညျတှငျ ယောငျယမျး၍ ရရှေတျလိုကျသံလေးကမူ ဇှဲအတှကျ နားဝငျခြိုလှသညျ။ စာတှမှော ရေးထားသညျ့အတိုငျးသာဆိုလြှငျ ကိုယျ့ပေါငျကိုယျ ပွနျဆိတျကွညျ့ရမညျ့ကိနျး။ ဒါအိပျမကျမြားလား .. ကိုယျတိုငျမွငျနရေသညျ့ ကိုယျ့မကျြလုံးတှကေိုတောငျ မယုံနိုငျပါ။ တကယျကို မိုကျသညျ့၊ ဆကျဆီကလြှသညျ့ မမလှလှ နနျးယမုံ၏ လကျထဲတှငျ သူ့လီးက ရောကျရှိနသေညျ။ “မမ မကျြနှာကို ပါအောငျ ရိုကျဦး .. အဲဒီတော့မှ မငျးလီးကို ကိုငျထားတာ မမဖွဈမှနျး ဒငျး သိမှာ” လီးကိုကိုငျ၍ ဖွေးဖွေးသာသာ ဆုပျစှဲနသေော လကျကစ၍ တဖွေးဖွေးခွငျး ကငျမရာကို နနျးယမုံ၏ မကျြနှာရှိရာသို့ ရှသှေ့ားသညျ။
နနျးယမုံ၏ လှပသော မကျြဝနျးတှထေဲတှငျ ထူးဆနျးသညျ့ အရိပျအယောငျတှေ လဲ့ဖွာနသေညျ။ သူမ ဘာတှေ တှေးနလေဲဆိုတာကို ဇှဲ ခှဲခွမျးစိတျဖွာဖို့ အခြိနျမအားပါ။ အပျေါစီးကနပွေီး လှမျးမွငျနရေသော နို့လုံးဖှေးဖှေးတှေ၏ ထိပျပိုငျးအား ကငျမရာကို ဆှဲ၍ လှမျးခြိနျလိုကျသညျ။ “အား .. ရှဈ .. ကောငျးတယျ” မာကွောနပွေီဖွဈသော လီးတနျကို လကျတဈဖကျနှငျ့ ဆုပျကာ ဂှငျးတိုကျပေးနရောမှ၊ နနျးယမုံက ကနျြနသေညျ့ လကျတဈဖကျနှငျ့ သူ့ဂှေးဥတှကေို ရှရှလေး လှမျးကိုငျသညျ။ လကျဖဝါးလေးထဲတှငျ ထညျ့ပွီး လကျခြောငျးလေးမြားဖွငျ့ မာဆကျ လုပျသလို နှိပျနယျပေးသောအခါ ဇှဲတဈယောကျ မကျြလုံးမြား မှေးကသြညျအထိ ဖီလငျတကျသှားသညျ။ ဘယျလိုမှ မနနေိုငျတော့ဘဲ ကငျမရာ မကိုငျထားသညျ့လကျနှငျ့ နီးစပျရာ နို့ကွီးတဈလုံးကို လှမျးဆှဲမိ၏။
“အိုး !!” “ဆောရီး .. မမ” “ရတယျ .. ကငျမရာကို သခြောကွညျ့ဦး” “ဟုတျ .. မမ သခြောရိုကျထားတယျ” ခံစားမှုဖီလငျနောကျသို့ မြောသှားသညျ့ ဇှဲ .. နနျးယမုံ၏ သတိပေးသံကွောငျ့ ကငျမရာကို တညျငွိမျအောငျ ပွနျထိနျးကိုငျလိုကျသညျ။ အောကျကိုငုံ့ကွညျ့လိုကျသညျ့သူနှငျ့ အပျေါကို မော့ကွညျ့နသေော နနျးယမုံ အကွညျ့ခငျြးဆုံသှား၏။ သူကွညျ့နခေိုကျ နနျးယမုံတဈယောကျ အသကျပွငျးပွငျးတဈခကျြ ရှူလိုကျသညျကို သတိထားမိသညျ။ “ဇှဲ .. မနကျကတုနျးက မငျး ရခြေိုးလာခဲ့တယျ မှတျလား” “ဟုတျတယျ .. မမ … ဘာဖွဈလို့လဲ” (သူ့ကိုယျကမြား အနံ့အသကျ ထှကျနလေို့လားဟု ဇှဲ တှေးမိသညျ။ သို့သျော သူ့အတှေးမှားသညျကို ခကျြခငျြး သိလိုကျလသေညျ) “မိုး .. လုံး .. ဟိနျး .. ကမြ လုပျသမြှကိစ်စတှေ အားလုံးဟာ ရှငျ့ကွောငျ့ဖွဈလာတာ .. ရှငျ့အပွဈတှကွေီးပဲ” ကငျမရာကိုကွညျ့ကာ ပွောသော ထိုစကားအဆုံးသတျနှငျ့အတူ နနျးယမုံ၏ နှုတျခမျးလှလှလေးက ဟသှားပွီး လြှာနီနီခြှနျခြှနျလေးက ထှကျလာကာ ဒဈလုံးကွီးကို လှမျးလကျြသညျ။ ဒဈထိပျနှငျ့ စိုစှတျသော လြှာထိပျလေး ထိမိမှုက နနျးယမုံလကျထဲရှိ လီးတနျကို ထောငျးခနဲ ရုနျးထစသေညျ။
ထိပျဖူးဝတှငျ စို့ထှကျနသေော အရညျကွညျလေးက နနျးယမုံ၏ လြှာဖြားလေးတှငျ တှဲခို၍ ပါသှားသညျ။ “ကောငျးတယျ .. မမရယျ .. ကောငျးတယျ .. လကျြ လကျြပေးပါဦး” ဒငျပွညျ့ကပျြပွညျ့ မာနပွေီဖွဈသော လီးတနျကွီး၏ အရငျးပိုငျးကို လကျနှငျ့ဆုပျကိုငျလိုကျပွီးနောကျ လှတျထှကျနသေညျ့ ထိပျပိုငျးတလြှောကျ နနျးယမုံ၏ လြှာနီနီလေးက ရှလြေ့ားနသေညျ။ အောကျဆငျးသှားလိုကျ၊ အပျေါတကျလာလိုကျနှငျ့ အစုနျအဆနျ လှုပျရှားပွီးနောကျ၊ ထိပျဖူးလုံးကွီးဆီ ပွနျအရောကျတှငျ ပါးစပျကို အစှမျးကုနျဟ၍ ငုံ့လိုကျသညျ။ ထို့နောကျ ခေါငျးကို ဖိခလြိုကျသညျတှငျ နူးညံ့သောနှုတျခမျးလေးမြားကို တှနျးတိုကျ၍ လီးဒဈက ပါးစပျပေါကျထဲသို့ ဝငျသှားသညျ။ “အား .. အရမျးကောငျးတယျ … မမ” ပွှတျခနဲ မွညျသံနှငျ့အတူ လီးထိပျက နနျးယမုံ ပါးစပျအတှငျးမှ ပွနျထှကျလာသညျ။
လီးကို ၉၀ဒီဂရီထောငျမတျနအေောငျ ကိုငျထားရငျး လကျဖဝါးနှငျ့ဆုပျကာ ဂှငျးတိုကျပေးသညျ။ မကျြနှာလှလှလေးက မော့တကျလာပွီး ဇှဲအား ထငျမှတျမထားသညျ့ မေးခှနျးတဈခုကို မေးလိုကျသညျ။ “မမနဲ့ မငျးကောငျမ .. ဘယျသူစုပျပေးတာ ပိုကောငျးလဲ” ဇှဲ၏ အသိအာရုံတှငျ လောလောဆယျ ကွီးစိုးထားသညျက နနျးယမုံသာ ရှိသဖွငျ့ သူ့ကောငျမဆိုသော ရညျညှနျးခကျြကို မနညျးတောငျ ပွနျစဉျးစားလိုကျရသညျ။ နောကျတော့မှ ခြောခြောငယျကို ပွောမှနျးသိလိုကျသညျ။ ခြောခြောငယျရဲ့ အစုပျအမှု (ဘလိုးဂြော့)က ဘယျလောကျကောငျးသညျမှနျး ဇှဲ မသိ။
သို့သျော နနျးယမုံ၏ ဘလိုးဂြော့က မတရားကောငျးနသေညျမှနျးတော့ ဇှဲ သိနသေညျ။ “မမက ပိုကောငျးတာပေါ့” (ဇှဲ စိတျထဲမှာတော့ သခြောသိအောငျ နှဈယောကျ ပွိုငျတူ စုပျပေးတာ ခံရလြှငျ ကောငျးမညျဟု ဖွတျခနဲ တှေးလိုကျသေးသညျ) နနျးယမုံကတော့ ဇှဲ၏ အတှေးကို သိနိုငျစှမျး မရှိပါ။ သူမက ပိုသာသညျဆိုသောအခကျြကွောငျ့ ဂုဏျယူဝငျ့ကွှားသညျ့ အသှငျပွောငျးသှားပွီး ခေါငျးကို ခကျြခငျြးပငျ ပွနျငုံ့၍ လီးကို အားရပါးရစုပျသညျ။ ကောငျးမှနျလှသညျ့ ခံစားခကျြမြားက လီးတနျတလြှောကျမှ တဆငျ့ ဇှဲ ကိုယျအနှံ့ ပွနျ့၍ စီးဝငျသှားသညျ။ လကျတဈဖကျနှငျ့ နနျးယမုံ၏ ခေါငျးကို လှမျးကိုငျပွီး ဖိခမြိသညျ။ နူးညံ့အိထှေးသော ပါးစောငျသားလေးမြား၏ အထိအတှကွေ့ောငျ့ လီးတနျတဈခြောငျးလုံးကို နနျးယမုံ ပါးစပျထဲ သှငျးပဈလိုကျခငျြတော့သညျ။
“အား .. ကောငျးတာ မမ” “အု .. အု” “မမ .. ဒိသရုပျ လုပျဖူးလား ??” နနျးယမုံ ကိုယျလုံးလေး ဆတျခနဲ တုနျသှားပွီး၊ ပါးစပျထဲမှလညျး လီးတနျက ကြှတျထှကျလာ၏။ ခတျေမှီသညျ့ အမြိုးသမီးတဈယောကျမို့ ဒိသရုပျဆိုသညျမှာ လိငျတနျကို အဆုံးထိ ပါးစပျထဲသို့ သှငျး၍ စုပျပေးခွငျးမှနျး နနျးယမုံ နားလညျပါသညျ။ သို့သျော သူမယောကျြား ဦးမိုးလုံးဟိနျးနှငျ့တောငျမှ ဒီလိုမြိုး တခါမှ မစမျးဘူးပါ။ ဦးမိုးလုံးဟိနျး၏ လိငျတနျကို စုပျပေးသညျဆိုတာကလညျး အမွဲတမျးရယျလို့ မဟုတျ။ သူမ စိတျပါသညျ့အခြိနျနှငျ့ ဦးမိုးလုံးဟိနျး အလှနျအမငျး ဆန်ဒရှိခြိနျသာ ဖွဈသညျ။ အခုတော့ သူမယောကျြား၏ လူယုံကောငျလေးက သူ့လီးကို ဒိသရုပျလုပျပေးဖို့ တောငျးဆိုနပွေီ။ သူမ ဘာလုပျရမညျနညျး …. ။
ကငျမရာ ကိုငျထားသော လကျကို သူ့မကျြနှာဘကျသို့ လှညျ့လိုကျပွီး ဇှဲတဈယောကျ မခိုးမခနျ့ ပွုံးရငျး စကားကို တဈလုံးခငျြး ပွောနသေညျ။ “ဒီမှာ ဘော့ဈ .. ခငျဗြား မိနျးမရဲ့ပါးစပျထဲကို ခငျဗြား လီးအကုနျ သခြောပေါကျမထညျ့ဖူးဘူး မှတျလား .. ဘယျထညျ့ရမလဲ .. ခငျဗြားကွီးက သူ့နောကျကှယျမှာ ဖောကျပွနျနတောကိုး .. အခု ခငျဗြား မရတဲ့ အခှငျ့အရေးကို ကနြျော ရပွီ .. မမ က ကနြေျာ့လီးကို ဒိသရုပျလုပျပေးတော့မယျ … ဒီမှာ ကွညျ့ ..” ဇှဲပွောလိုကျသညျ့ စကားတှေ အားလုံးကို လုံးစပေ့တျစေ့ နနျးယမုံ ကွားလိုကျပါသညျ။
သူမ ဦးနှောကျက ထိုအခကျြမြားကို လကျခံသငျ့၊ လကျမခံသငျ့ ဝခှေဲမရဖွဈနသေညျ။ သို့သျော ဇှဲ၏ လကျက သူမခေါငျးကို အသာကိုငျပွီး ဖိခလြိုကျသညျတှငျတော့ ပါးစပျကို အလိုလိုဟပေးမိသှားသညျ။ ထို့နောကျတှငျတော့ သူမ၏ သဘာဝဗီဇ က ကွီးစိုးသှားပွီး နှုတျခမျးမြားကို လီးတနျလုံးပတျ၏ အောကျခွပေိုငျးနှငျ့ ထိနိုငျအောငျ ကွိုးစားလိုကျသညျ။ ထိပျဖူးလုံးလုံးကွီးက အာခေါငျကို ကြျော၍ လညျခြောငျးဝသို့ ရောကျလာသောအခါ ပြို့ခငျြသလို ဖွဈသညျ။ အသကျရှူရခကျသလို ဖွဈသညျ။ မွနျမွနျဆနျဆနျ ပွနျထုတျလိုကျသညျ့တိုငျ ခြောငျးတဟှတျဟှတျ ဆိုးသညျ။
“အားမလြှော့နဲ့ မမ ရတော့မှာ … နဲနဲပဲ လိုတော့တာ” တကယျတော့ တျောတျောလိုပါသေးသညျ။ ဇှဲ လုပျခဲ့ဖူးသမြှ ကောငျမလေးတိုငျးတောငျမှ ဘယျသူမှ သူ့လီးကို အကုနျငုံနိုငျတဲ့သူ မရှိခဲ့ပါ။ သို့သျော ဇှဲ၏ အားပေးမှုကို နနျးယမုံက အသိအမှတျပွုဟနျနှငျ့ ခေါငျးညိတျပွပွီး လကျခံသညျ။ ပွီးနောကျ အသကျကို၀၀ရှူသှငျးလိုကျပွီး သူမပါးစပျကို လီးထိပျဖူးအား ပွနျငုံ၍ ဖိခလြိုကျပွနျသညျ။ အသကျကိုဝအောငျ ရှူထားခဲ့သညျ့အတှကျ လီးဒဈက လညျခြောငျးထဲဝငျလာသညျ့အခြိနျတှငျ အစောတုနျးကလို မဖွဈတော့။ ပြို့ခငျြသလို ဖွဈနသေညျ့ အခံတော့ ရှိနသေေးပမေယျ့ ထိုစိတျကို ထိနျးပွီး လညျခြောငျးအတှငျးသားတှကေို ဖွလြှေော့ကာ ငှကျပြောသီး မြိုခသြလို မြိုလိုကျသညျ။ လီးတနျလုံးပတျကို ဖိပှတျနသေော နှုတျခမျးသားမြားက အောကျဘကျသို့ ရှသှေ့ားပွီး နနျးယမုံ၏ နှာတံခြှနျခြှနျလေးက လီးအရငျးတှငျ ပေါကျနသေော အမှေးတှနှေငျ့ ရောယှကျသှားသညျ။
သူမ မေးလေးကမူ ဖောငျးကားနသော ဂှေးဥမြားနှငျ့ သှားထိသညျ။ “ဝိုး … ရေး .. မိုကျတယျ မမ” ဇှဲတဈယောကျတော့ နတျပွညျခွောကျထပျသို့ အရှငျလတျလတျ ရောကျနသေလိုကို ခံစားရသညျ။ နနျးယမုံ၏ ခေါငျးကို နောကျဘကျမှ ထိနျးကိုငျထားရငျး ခကျြခငျြး ပွနျကွှတကျမလာအောငျ စက်ကနျ့ပိုငျးလောကျ ဖိထားသညျ။ လီးဒဈဖူးနှငျ့ လညျခြောငျးသားအိအိတှေ ထိတှနေ့မှေုသညျ ပွောမပွနိုငျအောငျ ကောငျးလှနျးလှသညျ။ ခနကွာမှ ဖိထားမှုကို လှတျပေးလိုကျသညျ။ “မမ .. လုပျနိုငျတယျ .. ရေး !!!” အငျမတနျမှ ကနြေပျအားရသံနှငျ့ ဝမျးမွောကျဝမျးသာ ကွှေးကွျောနသေညျ့ နနျးယမုံကွောငျ့ ဇှဲတောငျ အူကွောငျကွောငျဖွဈပွီး အသံတိတျသှားရသညျ။ သူမ စုပျနသေော လီးသညျ ဘယျသူ့လီးဆိုတာကိုရော နနျးယမုံတှေးမိပါရဲ့လား မသိ ..။
နောကျထပျဘာမှ ထပျမံတိုကျတှနျးစရာ မလိုလိုကျဘဲ နနျးယမုံက သူ့လီးကို ပွနျ၍ ငုံစုပျသညျ။ ဒီတဈကွိမျတှငျတော့ နညျးစနဈကို သိနားလညျသှားပွီ ဖွဈသညျမို့ တဈခကျြထဲနှငျ့တငျ လီးက သူမပါးစပျထဲ ပြောကျကှယျသှားသညျ။ နနျးယမုံ၏ နှာတံလေးက လီးမှေးမြားကွား ပွနျလညျရောကျရှိသှားသညျ။ နှာဝထဲသို့ လီးမှေးအခြို့ကပငျ တိုးဝငျသှားရာ သူမ နှာခေါငျးကို ဘယျညာလှညျ့ကာ ကစားပွီး ဖယျထုတျလိုကျသညျ။ “အိုး .. ရှဈ” ဇှဲတဈယောကျ ဘယျလိုမှ မထိနျးနိုငျတော့။
သူ့လိငျတနျသညျ သံခြောငျးတဈခြောငျးလို တငျးမာနပွေီး၊ အခြိနျကိုကျ ဗုံးသလို ပေါကျကှဲဖို့ အသငျ့ဖွဈနသေညျ။ နနျးယမုံ၏ ခေါငျးကို ဖမျးကိုငျပွီး ခါးကိုလှုပျကာ သူမပါးစပျအား ဆောငျ့လိုးမိတော့သညျ။ နနျးယမုံက အလိုကျသငျ့ပငျ လညျခြောငျးကို ဖွလြှေော့ထားပေးယုံမက၊ လြှာလေးနှငျ့လညျး အဝငျအထှကျ ဖွဈနသေော လီး၏ အောကျဘကျပိုငျးကို ပတျ၍ လကျြပေးသညျ။ နူးညံ့လှသော နနျးယမုံ၏ ပါးစပျလှလှလေးထဲတှငျ လီးတဈခြောငျးလုံး ကုနျအောငျ ထညျ့ထားနိုငျသညျ့ ဖီလငျသညျ ဇှဲအတှကျတော့ ဘာနှငျ့မှကို မလဲနိုငျပေ။ သူမပါးစပျအား အရှိနျနှငျ့လိုးနသေော ဇှဲအား မိနဈပိုငျးမြှ ကွာသညျအထိ နနျးယမုံ လှတျပေးထားလိုကျ၏။
နနျးယမုံ အနနှေငျ့ အစပိုငျးတုနျးက သူမအပျေါ ဖောကျပွနျသညျ့ လငျဖွဈသူအား ပညာပေး လကျစားခဖြေို့ရနျ ဆုံးဖွတျထားခဲ့သျောလညျး ဒီလောကျအထိတော့ ဖွဈသှားလိမျ့မညျဟု မထငျထားခဲ့။ အခုတော့ ဖွဈခဲ့သမြှကို နောကျကွောငျးပွနျဖို့ မလှယျကူတော့ပါ။ သူမအနနှေငျ့လညျး ဒီအခွအေနရေောကျလာမှ နောကျဆုတျဖို့လညျး မစဉျးစားခငျြတော့။ ရှဆေ့ကျတိုးဖို့ရနျသာ ဆုံးဖွတျလိုကျတော့သညျ။ “ဇှဲ .. နဦေး” ပွှတျဆိုသညျ့ အသံနှငျ့အတူ လီးက ပါးစပျပေါကျထဲမှ ကြှတျထှကျသှားရာ ဇှဲတဈယောကျ တကယျကို ဖီးလျအောကျသှားသညျ။ နောကျထပျ တဈမိနဈ၊ နှဈမိနဈသာ ဆကျဆောငျ့ရလြှငျ သူပွီးတော့မှာ သခြောနသေညျလေ။ “ဘာ .. ဘာဖွဈလို့လဲ မမ??” အနညျးငယျ စိတျပကျြသံနှငျ့ မေးလိုကျသညျ့ ဇှဲ .. နနျးယမုံထံမှ အဖွကွေောငျ့ နရောမှာတှငျ ထခုနျခငျြသှားပွနျသညျ။ အနညျးဆုံး တော့ လူက မခုနျမိတာတောငျ လီးတနျကွီးက ဆတျခနဲ ခုနျတကျသညျ။
“တို့တတှေ ဖကျချ ကွရအောငျ .. ဇှဲ” “မမ .. တကယျ ပွောနတောလား” (အံ့အားသငျ့ပွီးရငျး သငျ့နရေသော ဇှဲ .. ဒီတခါတော့ သူ့မကျြလုံးတှေ ပနျးကနျပွားဝိုငျးလောကျ ကွီးသှားသညျဟု ဆိုလို့ရသညျ) “တကယျပွောနတော .. ဇှဲ .. ဒါ နောကျစရာ မဟုတျဘူး” ကွောငျတကျတကျနှငျ့ ကွညျ့နသေော ဇှဲအား ခပျငေါကျငေါကျလှမျးပွောရငျး နနျးယမုံ ဒရကျဈ(ဝတျစုံ)ရဲ့ အောကျအနားစကို လှမျးဆှဲကာ ခါးထကျသို့ မတငျသညျ။ ကွီးမားဖှေးဥသော တငျပါးကွီးနှဈဖကျသညျ ခပျသေးသေး ပငျတီက ဖုံးမထားနိုငျသညျ့နှယျ လုံးမောကျကာ ပျေါထှကျလာသညျ။ သူစိတျကူးယဉျထားသလို ဂြီစထရငျး ဝတျထားတာ မဟုတျသညျ့တိုငျ ပငျတီသေးသေးလေးက တငျပါးအထကျပိုငျးကိုသာ ဖုံးထားနိုငျသညျ့ ဆကျဆီကသြညျ့အမြိုးအစားဖွဈသညျ။
ဇှဲ၏ လီးက ဆတျခနဲ ထခုနျပွနျသညျ။ မနညျးပငျ ဖငျကြောတှကေို အမွနျရှုံ့လိုကျရပွီး လရညျမထှကျအောငျ ထိနျးထားရသညျ။ “မငျး .. သနျ့တာတော့ သနျ့တယျ နျော ..” “အာ .. သနျ့တယျ မမ .. ဒါပမေယျ့ မမ အဆငျမပွရေငျ ကနြေျာ့ဆီမှာ ကှနျဒုံးရှိတယျ” “ဒါဆို ယူလိုကျလေ .. ဘာလုပျနတောလဲ .. မွနျမွနျလုပျ … အခြိနျမရှိဘူး” “ဟုတျ .. ဟုတျ .. မမ .. လာ .. လာပွီ” ဇှဲတဈယောကျ ကမနျးကတမျး ကွမျးပွငျပျေါပုံနသေော ဘောငျးဘီကို ပွေးကောကျ၊ အိတျထဲက ပိုကျဆံအိတျကို ထုတျ၊ အိတျအလယျခေါငျက ဇဈကို ဖှငျ့ပွီး တဈခုထဲသာ ကနျြနသေညျ့ ကှနျဒုံးကို မွနျမွနျထုတျယူရသညျ။ ကှနျဒုံးအိတျထောငျ့ကို ပါးစပျနှငျ့ကိုကျကာ ဆှဲဖောကျလိုကျပွီး အစှနျးစထှကျလာသော အကွညျပွားလေးကို လီးထိပျတှငျစှပျကာ လိပျခလြိုကျသညျ။
“နဦေး !! .. ကငျမရာနဲ့ ခြိနျရိုကျထားဖို့ မမနေဲ့ဦး” ကှနျဒုံးစှပျပွီးသညျနှငျ့ သူမနားသို့ ပွေးကပျတော့မလို ဖွဈနသေညျ့ ဇှဲအား နနျးယမုံ လှမျးသတိပေးရသညျ။ သူမ သတိပေးလို့သာ တျောတော့သညျ။ အခုအခြိနျတှငျ ဇှဲ စိတျထား၌ ကငျမရာရိုကျကူးဖို့ ကိစ်စ လုံးဝရှိမနပေါ။ စားပှဲစှနျး၌လကျထောကျကာ နရောယူထားသဖွငျ့ လုံးဝနျးပွီးထှကျနသေော ပနျးသီးပုံစံဟု တငျစားချေါဝျေါရမညျ့ တငျသားဖှေးဖှေးကွီး နှဈဖကျကသာ ကွီးစိုးထားသညျ။ “ရပွီ .. မမ” ကငျမရာကို ခပျလှမျးလှမျးရှိ အလှစိုကျ ပနျးအိုးပျေါတှငျ သှားပွေးတငျပွီးနောကျ နနျးယမုံ ဖငျပေးထားရာနရောသို့ ဇှဲ ရောကျလာသညျ။ လှနျတငျထားသော ဒရကျဈ(ဝတျစုံ)စ လိပျကာ ဖုံးနသေညျ့ ခါးကငျြကငျြလေးကို ဇှဲ လကျတဈဖကျနှငျ့ ဆုပျကိုငျရငျး၊ နောကျတဈဖကျက လီးတနျကို ထိနျးကာ စောကျဖုတျဝတှငျ တလေို့ကျသညျ။ နနျးယမုံကလညျး အလိုကျသငျ့ပငျ တငျပါးကို ကော့ကာ ကုနျးပေးထားသညျ ဖွဈရာ အရညျကွညျစို့နသေော အဝလေးနှငျ့ ကှနျဒုံးစှပျထားသော ဇှဲ၏ လီးထိပျတမေိ့သညျ။
ဇှဲ သုံးလရှေိ့သော ကှနျဒုံးက လု ပါသော အမြိုးအစားမို့ ရှညျရှညျဝေးဝေး တှေးမနတေော့ပါ။ နရောမှနျသညျကို သိသညျနှငျ့ ဖိကာ သှငျးပဈလိုကျသညျ။ (အားပါးပါး .. ကပျြလှခညျြလား) “အီး … အငျ့ … အငျ့” (နနျးယမုံ ကိုယျကလေး ဆတျခနဲတုနျ၍ ခေါငျးမော့ကာ မကျြလုံးတှေ မှေးစငျးကသြညျ) “ဒီမှာ ဘော့ဈ .. ခငျဗြားကွီးတှပွေီ့ မှတျလား … ကြုပျလုပျနတော ဘယျသူလဲဆိုတာ .. တှတေ့ယျဟုတျ .. အဲဒါ ခငျဗြား သစ်စာမရှိဘဲ ပဈထားတဲ့ မိနျးမလေ … ဟုတျပွီလား” ကွီးမားတုတျခိုငျသောလီးကွီးက သူမကိုယျတှငျးသို့ အဖုတျဝမှတဆငျ့ ပွညျ့ကပျြစှာ ဝငျလာမှုကွောငျ့ မကျြတောငျလေးမြား မှေးစငျးကသြှားသူ နနျးယမုံ .. ဇောငျ့ကွှားကွှားလသေံနှငျ့ လှမျးပွောနသေူ ဇှဲ၏ စကားမြားကွောငျ့ ခွံခုနျတဲ့လငျဖွဈသူကို မကနြေပျသညျ့စိတျတှေ ပွနျထလာပွီး သူမတငျပါးတှကေို နောကျသို့ တှနျးပို့ပဈလိုကျသညျ။
ဇှဲနှုတျဖြားမှ ကနြေပျအားရစှာ ညညျးသံနှငျ့အတူ လီးကွီးက ကဉျြးကပျြနသေော လမျးကွောငျးတလြှောကျ ပွေးဝငျသညျ။ ဇှဲ၏ ဆီးစပျနှငျ့ ဖွူဖှေးအိစကျသော တငျပါးကွီးတဈစုံ ထိကပျသှားသညျ။ “အိုး .. ရှဈ .. ကောငျးတယျ” စူးစူးရှရှအျောပွီး ကနြေပျအားရသံအပွညျ့နှငျ့ ရရှေတျလိုကျသညျ့ နနျးယမုံစကားကွောငျ့ ဇှဲပငျ အံ့အားသငျ့ပွီး အဖုတျထဲအပွညျ့ဝငျနသေော လီးကွီးအား ဘာမှမလုပျဘဲ ငွိမျနမေိသညျ။ ဇှဲကသာ ထိုသို့ ငွိမျနပေမေယျ့ နနျးယမုံကတော့ ငွိမျနခွေငျး မရှိပါ။ သူမဖငျကွီးတှကေ တုနျခါနပွေီး၊ အဖုတျအတှငျးသားတှကေမူ ဇှဲ၏ လီးကို ပတျကာရဈဆှဲနကွေသညျ။ “လိုး .. လိုးလေ .. ဇှဲ .. မမ ကို လိုး .. ဖကျချ မီ .. ပလိဈ !!” သူ့ယောကျြား စိတျဆိုးဒေါသထှကျအောငျပဲ နနျးယမုံ တမငျပွောနတောလား၊ ဒါမှမဟုတျ သူ့လီးကွောငျ့ပဲ ဆန်ဒတှေ တကျကွှလို့ လိုးခိုငျးတာလား ဇှဲ သခြောဝခှေဲမရပါ။ ဘယျလိုပဲဖွဈဖွဈ ဒီအခကျြတှအေား ဇှဲ ဂရုစိုကျမနတေော့ပါ။
လုံးဝနျးသလောကျ တငျးရငျးအိစကျနသေညျ့ တငျပါးကွီးနှဈဖကျကို ဆုပျကာဆှဲကိုငျပွီး အားကုနျကို လိုးတော့သညျ။ လီးက စောကျဖုတျအတှငျးသားတှကေို ပှတျတိုကျပွီး ထှကျလာလိုကျ၊ ဝငျသှားလိုကျ ဖွဈနသေညျ။ တဖွောငျးဖွောငျးနှငျ့ ပွေးလှားနသေော ပဈစတငျခြောငျးနှငျ့တောငျ တူလှပသေညျ။ နနျးယမုံ တငျသားတှကေ တကယျကို ဖွူဖှေးကားစှငျ့ကာ လုံးဝနျးလှသညျ။ နောကျကနေ ဒေါ့ဂီစတိုငျလျနှငျ့ လိုးနရေသူ ဇှဲအဖို့ ဆောငျ့ခကျြတိုငျး တငျသားတှေ တုနျတကျသှားသညျ့ မွငျကှငျး၊ အရညျကွညျတှေ စိုနသေော လီးကွီး အဖုတျထဲ ပြောကျကှယျသှားသညျ့ မွငျကှငျး၊ အဆီရယျလို့ မရှိဘဲ ကြော့ရှငျးနသေော ကြောပွငျထကျတှငျ ဆံနှယျလေးတှေ လှုပျခါသှားသညျ့မွငျကှငျး .. ရမ်မကျကွှဖှယျရာ မွငျကှငျးပေါငျး မြိုးစုံကို မွငျနရေသညျ။
သို့သျော ထိုအရာမြားထကျ ပို၍ သူ့စိတျကို ဖမျးစားထားသညျက လီးအဝငျအထှကျကို မွငျအောငျ ဆိုပွီး ဖငျသားနှဈဖကျကို လကျနှငျ့ဆုပျကိုငျပွီး ဆှဲဖွဲထားမှုကွောငျ့ ထငျထငျရှားရှားပျေါနသေော စအိုပေါကျ နီနီစူစူလေး။ နနျးယမုံသညျ သူမကိုယျသူမ ဂရုတစိုကျနှငျ့ အမွဲကြော့ရှငျးနအေောငျ ပွငျဆငျထားလို့လား မသိ။ အဖုတျနှုတျခမျးသားတှရေော ဖငျကွား ၊ စအိုပေါကျ ဘေးပတျဝနျးကငျြရော အားလုံးက အမှေးအမှငျကငျးပွီး ဖွူဖှေးသနျ့စငျနသေညျ။ အဖုတျကို အပီအပွငျ ဆောငျ့လိုးနရေငျးမှ ဇှဲတဈယောကျ ဖငျခခြငျြလာသညျ။ နနျးယမုံကို ခရြဖို့ အရေးက ဒီတဈသကျ ပွနျရခငျြမှ ရတော့မညျဖွဈရာ ကွုံကွိုကျတုနျး ရှိရှိသမြှ အပေါကျအကုနျဖှငျ့လိုကျခငျြသညျ။ “အငျး … အငျ့ .. မမ ကောငျးလာပွီ .. ဇှဲ .. ဆောငျ့ .. နာနာဆောငျ့” ကာမရမ်မကျဇောတကျကာ နနျးယမုံတဈယောကျ အပီအပွငျ ပေါကျကှဲထှကျနသေညျ။
မိမိယောကျြားမဟုတျတဲ့ ငယျရှယျနုပြိုတဲ့ ယောကျြားသားတဈဦးက လီးကွီးကွီးနှငျ့ လိုးပေးတာ ခံနရေသညျမို့ ခံစားမှုအရှိနျကလညျး ခါတိုငျးနှငျ့ မတူ။ တဈသကျတာတှငျ မကွုံဘူးသေးသညျ့ အတှအေ့ကွုံနှငျ့ အကွီးအကယျြ ပွီးတော့ဖို့ နနျးယမုံ တဲတဲလေးသာ လိုတော့သညျ။ “အငျ .. အာ .. ဘာဖွဈလို့ ဆှဲထုတျလိုကျတာလဲ .. ဇှဲ” အရမျးကွီး ကောငျးနသေညျ့ အခြိနျတှငျ အဖုတျထဲမှ လီးဆှဲထုတျခံရသဖွငျ့ မဲ့တဲ့တဲ့ မကျြနှာလေးနှငျ့ နနျးယမုံ လှညျ့ကွညျ့ကာ မေးရှာသညျ။ စားပှဲစှနျးအား ထောကျထားသညျ့ လကျဖွငျ့ လီးတနျကွီးအား လှမျးဆှဲမညျတောငျ ပွုသညျ။ ဇှဲကာ အဆှဲမခံဘဲ နောကျသို့ ခွတေဈလှမျးဆုတျသညျ။ တငျပါးကွီး တဈဖကျကို ကိုငျထားသော လကျကိုမူ စအိုပေါကျလေးပျေါ ရှပွေီ့း လကျမနှငျ့ စူတူတူအဝလေးကို ဖိထိုးခသြညျ။ “မမ ယောကျြားက မမဖငျကို လုပျဖူးလား” “အိုး .. နိုး .. မလုပျဘူး .. မလုပျဖူးဘူး” နနျးယမုံ၏ စအိုပေါကျလေးက တငျးရငျးနသေျောလညျး ဇှဲက လကျမကို အားနှငျ့ဖိခလြိုကျသညျမို့ ထိပျပိုငျးလောကျ ဝငျသှားသညျ။
ခြှေးသီးလေးတှေ စို့နပွေီ ဖွဈသော နနျးယမုံကိုယျကလေး ဆတျခနဲ တုနျသှားပွီး လီးကို လှမျးဆှဲသောလကျကို ကမနျးကတမျး စားပှဲပျေါသို့ ပွနျထောကျလိုကျရသညျ။ ဖငျပေါကျနုနုလေးထဲသို့ ဝငျသှားသော သူ့လကျမကို အသာလေး လှုပျပေးရငျး ကငျမရာတငျထားရာဘကျသို့ ဇှဲ လှမျးကွညျ့ကာ စပျဖွီးဖွီးရုပျနှငျ့ ပွောသညျ။ “ကဲ .. ဘော့ဈ .. ဒီတဈခါတော့ နောကျဆုံးပိတျအဖွဈ ခငျဗြားကွီး တခါမှ မရောကျဘူးတဲ့နရောကို ကနြေျာ့လီးရောကျအောငျ သှားလိုကျမယျ .. ဘယျနရောလဲဆိုတာ လကျမကို မွငျတယျ မှတျလား .. မမနနျးယမုံရဲ့ ဗါဂငျြဖငျပေါကျလေးပေါ့ဗြာ .. ဟား ဟား” ဇှဲပွောနသေညျ့ စကားလုံးတိုငျးကို နနျးယမုံ ကွားပါသညျ။ ယောကျြားဖွဈသူ၏ အလုပျသမားက သူဌေးကတျောဖွဈသူ သူမကို ဖငျခဖြို့ ကွံစညျနသေညျဆိုတာ နနျးယမုံ နားလညျပါသညျ။
သို့သျော အခုအခွအေနတှေငျ သူမ ငွငျးဆနျခငျြစိတျတဈခုမှ မရှိတော့ပါ။ အလြှံညီးညီး တောကျလောငျနသေညျ့ ရမ်မကျစိတျတှငျ၊ ဖောကျပွနျသူ ယောကျြားအပျေါ ခံပွငျးဒေါသထှကျမှုက ပေါငျးစပျလိုကျသောအခါ သူမလုပျသမြှ အမှနျဟု နနျးယမုံ ထငျမွငျနသေညျ။ ဖငျမကလို့ ဘာကွီးပဲခခြ .. ဇှဲ လုပျခငျြတာလုပျဖို့ သူမ သဘောတူသညျ။
“လုပျ .. ဇှဲ .. မမ ဖငျပေါကျက မငျးအတှကျပဲ .. ဒါမှ ဒငျးတို့ ကောငျးကောငျးမှတျမှာ” ဖငျပေါကျထဲသို့ ဝငျနပွေီ ဖွဈသော လကျမပျေါသို့ ထှီခနဲ နအေောငျ တံတှေးထှေးခလြိုကျသညျ။ လကျမကို နှဲ့ပွီး လှုပျပေးလိုကျရာ တံတှေးမြား စိမျ့ဝငျလာသညျ။ ဖငျဝလေးက အေးခနဲ ဖွဈသှားသညျ။ နနျးယမုံ စအိုဝလေးအား အလိုလို ကြုံ့မိသညျ။ “မမ .. စိတျလြှော့ထား .. ဖငျဝကို အရမျးတငျးမထားနဲ့ ဟုတျပွီလား ..” “အငျး .. ဇှဲ .. ဖွေးဖွေးနျော” “ဟုတျ .. မမ” တံတှေးအကူအညီရော၊ ရှဲရှဲစိုနသေော အဖုတျထဲမှ ထှကျသညျ့ စောကျရညျကွညျမြား၏ အကူအညီရော ပေါငျးကာ ပွငျဆငျပွီးနောကျ လီးထိပျဖူးဝကို သခြောတသေ့ညျ။
တအားကို ဖိသှငျးပဈလိုကျခငျြသညျ့ စိတျက မြားနပေမေယျ့၊ နောကျပေါကျကို ဆကျဆံသညျမှာ နနျးယမုံအတှကျ ပထမဦးဆုံး အကွိမျဆိုတာ ဇှဲ သိပါသညျ။ သို့အတှကျကွောငျ့ အဖုတျပေါကျထကျ မြားစှာသေးငယျသော စအိုပေါကျထဲသို့ သူ့လီးဒဈ ဝငျနိုငျဖို့ အတတျနိုငျဆုံး ကွိုးစားသညျ။ အားအရှိနျကို ၁%လောကျမှစ၍ တဈကွိမျလြှငျ ဆယျရာခိုငျနှုနျးလောကျ ထပျကာ တိုးတိုးသှားသညျ။ ရာခိုငျနှုနျး တဈရာပွညျ့ဖို့တော့ မစောငျ့လိုကျရပါ။ နနျးယမုံက စိတျကိုလြှော့ပွီး ဖငျပေါကျကို ဖှငျ့ထားပေးရာ ၇၀% ကြျောကြျောလောကျတှငျ လီးဒဈဖူးက အထဲသို့ မွုပျဝငျသှားသညျ။
“အား … ကြှတျ … ကြှတျ ..” “ရှဈ .. အရမျးကပျြတာပဲ မမ .. သိပျကောငျးတယျ .. ဆိုးဂှတျ” တဈယောကျက နာလို့ ညညျးတာဖွဈပွီး၊ တဈယောကျကတော့ ကောငျးလှနျးလို့ ညညျးတာဖွဈသညျ။ နာတာတော့ နာနပေမေယျ့ နနျးယမုံ ရုနျးကနျပွီး ထှကျသညျတော့ မလုပျပါ။ စားပှဲစှနျးကိုသာ လကျနှဈဖကျနှငျ့ တငျးတငျးဆုပျကိုငျထားရာ သူမ၏ လကျဆဈလေးမြားသညျ အားပွုထားရသညျ့အရှိနျနှငျ့ အဖွူရောငျတောငျ သမျးလာနရှောသညျ။
“မမ .. ဆကျသှငျးမယျနျော .. ခန အောငျ့ခံထား” အပွဈအနာအဆာဆိုလို့ အမညျးစကျတဈစကျတောငျ မရှိသညျ့ ဖွူနုဖှေးအိနသေော တငျပါးကွီးနှဈဖကျအား ပေါငျးစပျထားသညျ့ စအိုပေါကျနုနုလေးအား သူ့လီးကွီးက ထိုးခှဲကာ ဝငျရောကျနသေညျ့ မွငျကှငျးသညျ ဇှဲအတှကျတော့ ၂၀၁၅အတှကျ ကွညျ့အကောငျးဆုံးသော မွငျကှငျးသာဖွဈသညျ။ ခြော့သှငျးလိုကျ၊ ခနရပျထားလိုကျ၊ အားစိုကျကာ ထပျဖိထညျ့လိုကျနှငျ့ အခြိနျမညျမြှ ကုနျသှားမှနျး မသိ။ တျောတော့တျောသေးသညျ။ စောစောတုနျးက ပွီးခငျြသလို ဖွဈနသေော ဇှဲ .. ဖငျပေါကျထဲ လီးဝငျအောငျ ကွိုးစားနရေသဖွငျ့ ပွီးခငျြစိတျက နညျးနညျးပြောကျသှားသညျ။
လီးအရငျးပိုငျးနှငျ့ တငျပါးဝိုငျးဝိုငျးကွီးတှေ ထိဖို့ နဲနဲလေးသာ လိုတော့သညျအခြိနျတှငျ ဇှဲ ခနနားလိုကျသညျ။ “မမ အဆငျပွလေား ..” “တဈဆို့ဆို့ကွီးနဲ့ .. နရေထိုငျရတာတော့ တမြိုးကွီးပဲ” “ဒါက အစမှတျလို့ပါ .. လီးအဝငျအထှကျဖွဈရငျ အဆငျပွသှေားမှာ .. မမ ဆှမြေိုးမသှေ့ားရစမေယျ .. ဟီး .. ဟီး” “ဆှမြေိုးမမလေ့ညျး မငျးဘော့ဈကို မရေ့ငျ ရပွီ .. ဆောငျ့တော့ကှာ” “စိတျခြ .. မမ” (လာပွီ) ဆိုပွီး အခကျြပေးသံအဆုံး၌ ဇှဲ သူ့လီးကို ပွနျဆှဲထုတျ၍ အားနှငျ့တဈခကျြ ဆောငျ့သှငျးလိုကျသညျ။ ကပျြသညျကတော့ တကယျကို ပွုတျတူနှငျ့ ညှပျထားသလား ထငျရသညျ။
သို့သျော ထိုပွုတျတူသညျ နူးညံ့လှနျးသော ကတ်တီပါသားနှငျ့ အလားသဏ်ဌာနျ တူနပေါသညျ။ တဈခကျြခငျြး ဖွေးညငျးစှာ ပွနျထုတျလိုကျ၊ အားနှငျ့ဆောငျ့သှငျးလိုကျနှငျ့ အပြိုရညျပကျြခါစ ဖငျပေါကျလေးကို စိတျတိုငျးကြ လိုးဆောငျ့နသေညျ။ သူ့ဆောငျ့လိုကျတိုငျး ဖငျဆုံကွီး လှုပျခါသှားပွီး စအိုပေါကျလေးကတော့ အစှမျးကုနျကို ပွဲလနျလို့နသေညျ။ “အငျး … အာ့ .. ဇှဲ .. အား … အာ့ .. ဇှဲ … လုပျ .. လုပျ … အာ့” အသှငျးအထုတျမှနျလာသညျနှငျ့အမြှ နနျးယမုံ၏ ဖငျပေါကျလေးသညျ ဇှဲ၏ လီးကို ကောငျးကောငျးလကျခံလာနိုငျသညျ။ နာသေးတာတော့ နာနသေေးပမေယျ့ ထိုနာတာနှငျ့တှဲ၍ ရရှိလာသော ခံစားမှုဖီလငျကို မကျမောခုံမငျလာသညျ။ ဇှဲ၏ ဆောငျ့ခကျြနှငျ့ညီညီ သူမတငျပါးကို ကော့ကော့၍ ပေးသညျ။
ဇှဲကလညျး နနျးယမုံတဈယောကျ ဖငျအလိုးခံရတာ ဇိမျတှလေ့ာပွီဆိုသညျကို နားလညျသညျ့အလြောကျ အလြှော့မပေးတော့ဘဲ လီးကို ဆောငျ့ခကျြပွငျးပွငျးမြား သုံးကာ လိုးသညျ။ “အိုး … ရကျဈ … ဆောငျ့ … အာ့ .. အား .. မမ ပွီးတော့မယျ … ပွီး … ပွီးပွီ ..” “အား .. ဖကျချ … ထှကျ .. ထှကျပွီ” နနျးယမုံ၏ ဖငျပေါကျရော၊ အဖုတျရော ရှုံ့ပှရှုံ့ပှဖွဈကာ အကွီးအကယျြ ပွီးသှားသလို၊ ဇှဲလညျးပဲ ဖငျသားတှေ ကြုံ့ကာတုနျဝငျသှားသညျ အထိ အကောငျးကွီးကောငျးပွီး လရညျတှေ ပနျးထုတျမိသညျ။ တကိုယျလုံးရှိ အားအငျတှေ နနျးယမုံ ဖငျပေါကျလေးထဲ စီးဝငျသှားသလို ခံစားရသညျ။ “အရမျးကောငျးတာပဲ မမ ရယျ ..” နောကျဘကျနားရှိ ထိုငျခုံပျေါသို့ ခွပေဈလကျပဈ ထိုငျကာ ကသြှားရငျး ဇှဲတဈယောကျ မောပနျးသံနှငျ့ ပွောရှာသညျ။ နနျးယမုံကလညျး အသကျကို မှနျမှနျဖွဈအောငျ တဟငျးဟငျးနှငျ့ ရှူနရေငျးမှ သူ့ကို လှမျးကွညျ့ရငျး ယဲ့ယဲ့လေး ပွုံးပွသညျ။
“မမလညျး အရမျးကောငျးသှားတယျ .. ဇှဲ” “……” ဘာပွောရမှနျး မသိဘဲ ဇှဲ ငွိမျနစေဉျမှာပငျ နနျးယမုံက အံ့သွဖှယျရာ အပွုအမူတဈခုကို ပွုလုပျလိုကျသညျ။ ဇှဲ ရှတှေ့ငျ ဒူးထောကျကာ ထိုငျလိုကျပွီး အခုထကျထိ မခြှတျရသေးသော ကှနျဒုံးကို လိပျကာ ခြှတျယူလိုကျသညျ။ လရညျတှေ ပွညျ့နသေော ကှနျဒုံးကို လကျဖဝါးပျေါတှငျကာ ခနကွညျ့ပွီးနောကျ မူနှဲ့နှဲ့နှငျ့ ပွုံးပွသညျ။ ထို့နောကျတှငျ ခြှဲကြိကြိဖွဈကာ ကနျြခဲ့သော သူ့လိငျတနျအား လကျနှငျ့စုပျကိုငျပွီး အပျေါအောကျ လြှာနှငျ့ လကျြပေးသညျ။ ဇှဲတဈယောကျ ထိုငျနရောမှ ဖငျကွီး ကွှမတကျအောငျပငျ မနညျး သတိထားနလေိုကျရသညျ။
စိတျကနြေပျသညျအထိ လကျြပွီးသှားလို့ နနျးယမုံက နောကျဆုံးပိတျအနနှေငျ့ သူ့လီးထိပျအား ပွှတျခနဲနအေောငျ နှုတျခမျးလေးနှငျ့ နမျးပွီး လှတျပေးလိုကျသညျတှငျ ဇှဲ၏ လီးက ပွနျ၍တငျးမာစတောငျ ပွုနသေညျ။ “အိုကေ .. ဒီလောကျဆို ကငျမရာကို ပိတျလိုကျလို့ရပွီ .. မမတို့ ဟိုသစ်စာဖောကျနှဈယောကျကို တုံ့ပွနျလကျစားခဖြေို့ ကောငျးကောငျးကွီးလုံလောကျနပွေီ ထငျတယျ .. သခြောတယျ ဒငျးတို့တော့ မမတို့ကို ဂြဲလကျဈဖွဈယုံမက ဒါတှမွေငျရငျ ဆှဆှေ့ခေု့နျအောငျ ဒေါသထှကျနကွေမှာ ..” ဒျေါနနျးယမုံက တကျကွှစှာ ပွောနသေလောကျ ဇှဲကတော့ ပွုံးဖွီးဖွီးနှငျ့ ခေါငျးညိတျပွယုံသာ တတျနိုငျတော့သညျ။
အခု ရိုကျကူးထားသညျ့ ဓါတျပုံတှနှေငျ့ ဗှီဒီယိုကို ဦးမိုးလုံးဟိနျး မွငျလြှငျ သခြောတာကတော့ သူအလုပျပွုတျမှာ ဖွဈပါသညျ။ သို့သျော သူပွုလုပျခဲ့သညျ့ ကိစ်စမှနျသမြှကို ပွနျစဉျးစားကွညျ့လြှငျ ဇှဲအနနှေငျ့ အလုပျပွုတျမညျ့ကိစ်စအား လုံးလုံးကို ခေါငျးထဲထညျ့မနတေော့ပါ။ ဘော့ဈဖွဈသူ ကတိပေး ပွောထားခဲ့သညျ့ လကုနျလြှငျရမညျ့ ဘောနပျဈကိုလညျး မလိုခငျြတော့ပါ။ ဦးမိုးလုံးဟိနျးက ပေးမညျ့ဘောနပျဈထကျသာသညျ့ အကြိုးအမွတျကို သူ့ရဲ့အရမျးကိုဆကျဆီကပြွီး၊ အရမျးကို လှပသညျ့ မိနျးမဖွဈသူထံမှ ရရှိခဲ့သညျ မဟုတျပါလား …ပွီးပါပွီ။
မမ .. ဓါတ်ပုံရိုက်တာတော့ ဟုတ်ပါပြီ .. ဒါပေမယ့် .. ကျနော့် အလုပ်က ..” “နိုး .. နိုး .. စိတ်မပူနဲ့ .. ဇွဲ .. မမတာဝန်ယူတယ် .. မင်းရဲ့ဘော့စ် မင်းကို လက်ညိုးနဲ့တောင် မထိစေရဘူး” ရဲရဲကြီး အာမခံနေသော ဒေါ်နန်းယမုံကြောင့် ဇွဲ ပုခုံးတစ်ချက်သာ တွန့်ပြလိုက်သည်။ ဟုတ်သည်လေ။ သူမက ဒီလိုပြောမှတော့ ဘာဂရုစိုက်စရာ လိုနေသေးသနည်း။ နောက်ပြီး အခုအခြေအနေတွင် အလုပ်ပြုတ်မည့်ကိစ္စထက် မမဟု သူမကိုယ်သူမ သုံးနှုန်းနေသော ဒေါ်နန်းယမုံ .. လက်စားချေရန်ဆိုသော ခေါင်းစဉ်နှင့် ဘယ်လောက်အထိ လုပ်ဆောင်ချင်သည့်အချက်ကို ပိုစိတ်ဝင်စားနေမိသည်။ “ဟုတ်ကဲ့ .. ဒါဆို … ကျနော်တို့ ဘယ်လိုဆက်လုပ်ကြမှာလဲ ..” “အင်း .. ဟုတ်သားပဲ … ဒီလိုလုပ်မယ် .. တို့နှစ်ယောက် ဖက်ထားတာနဲ့ စကြတာပေါ့” “အိုကေ .. မမ” ဒေါ်နန်းယမုံ ပေးလိုက်သော ကင်မရာကို ထိုင်ရာမှ ထ၍ လှမ်းယူလိုက်သည်။
ဇွဲနှင့် နန်းယမုံ .. ဦးမိုးလုံးဟိန်း၏ ခန့်ညားလှသော ရုံးခန်းအတွင်းမှ သစ်လွင်လှသော စားပွဲကြီး၏ အစွန်းတွင် အတူတူရပ်မိသွားသည်။ နန်းယမုံတော့ ဘယ်လိုနေသည် မသိ .. ဇွဲကတော့ ရင်ဘတ်ထဲတွင် ကုလားဘုရားပွဲ လှည့်နေသလိုကို ခံစားနေရသည်။ အဲယားကွန်းအသံ တိုးတိုးလေးသာ မြည်နေသော အလုံပိတ်ရုံးခန်းထဲတွင် သူ့ရင်ခုန်သံ တဒုန်းဒုန်းက အတော်ပင် ကျယ်လောင်လှသည်။ နန်းယမုံ ကြားသွားမှာတောင် စိတ်ပူရသည်။ “ဒီလောက်ဆို ရမလား .. မမ” ကင်မရာကိုင်ထားသော ညာလက်ကို ဆန့်ထုတ်ပြီး ဆယ်ဖီရိုက်လို့ရအောင် ဇွဲ ပြင်လိုက်သည်။ ရင်သားထွားထွားတွေ မို့တက်လာသည်အထိ နန်းယမုံက အသက်ကိုရှူလိုက်ရင်း ဇွဲအနားသို့ တိုးကပ်လာသည်။ သင်းပျံ့သော အကောင်းစား ရေမွှေးနံ့က စောစောကထက် ပို၍ နီးကပ်စွာ ဇွဲထံပါးသို့ ရောက်ရှိလာသည်။ “ရပြီ .. ရိုက်တော့” ကိုယ်ချင်းထိကပ်သွားမှုနှင့်အတူ သူ့ခါးကို လာဖက်လိုက်သည့် နန်းယမုံကြောင့် လက်မြှောက်ကိုင်ထားသော ကင်မရာဘက်ကို ဇွဲ ကြည့်နေဖို့ သတိမေ့သွားသည်။
နီးကပ်လာသည့် မျက်နှာဖူးဖူးလှလှလေးအား ယောင်ယမ်း၍ ငေးမိသွားပြီးနောက် ကင်မရာခလုတ်ကို ကိုင်ထားသော လက်ညိုးက အလိုအလျောက် နှိပ်မိသွားသည်။ “ကလစ်” “ရိုက်ပြီးပြီလား .. ပြဦး” သူ့လက်ထဲမှ ကင်မရာကို ဆွဲယူသွားတော့ ဇွဲ ယောင်တောင်တောင်နှင့် ပေးလိုက်၏။ နန်းယမုံ ဗီဒရိုမျက်နှာပြင် ကို အာရုံစိုက်နေချိန်တွင် ဘေးစောင်းအနေအထားနှင့် မြင်နေရသော သူမအား ခိုးကြည့်မိသည်။ ဇွဲက နန်းယမုံထက် စာလျှင် ခေါင်းတစ်လုံးစာလောက် အသာလေး မြင့်နေလေရာ၊ ဖျဲသီး (ဖရဲသီး) လို့ တင်စားခေါ်ဆိုလို့ရမည့် ရွှေရင်ထွားထွားတွေ၏ အထက်ပိုင်းကို အသက်ရှူမှားဖွယ် မြင်နေရသည်။ “အဆင်မပြေသေးဘူး .. ဇွဲ .. ဒီလောက်နဲ့တော့ မမတို့နှစ်ယောက်က အတွဲနဲ့ တူမနေဘူး ..” “ဒါ .. ဒါဆို .. ဟိုလေ .. ကျနော်တို့ နှစ်ယောက် နမ်းနေတဲ့ ပုံဆိုရင်ကော” ချောချောငယ်နှင့်တုန်းက အဖြစ်အပျက်ကို ပြန်စဉ်းစားမိသည့် ဇွဲ .. အရဲစွန့်ကာ ပြောလိုက်သည်။ နန်းယမုံက ကြည်လင်လှသည့် မျက်ဝန်းနက်နက်လေးများနှင့် သူ့ကို အခုမှ မြင်ဖူးသည့် လူတစ်ယောက်လို စိုက်ကြည့်သည်။
ဇွဲ ရင်ထဲ ရှိရှိသမျှ တန်ခိုးရှင်တွေကို တမိပြန်သည်။ စက္ကန့်ပိုင်းလောက် အချိန်ကြာသွားတော့မှ ဇွဲ အဆိုကို လက်ခံသည့်နှယ် နန်းယမုံ ခေါင်းလေးညိတ်ပြသည်။ သူမလက်ထဲ ကိုင်ထားသော ကင်မရာကို ဇွဲအား ပြန်ပေးလိုက်သည်။ နှစ်ဦးသား ကိုယ်ချင်း ပြန်ပူးကပ်သွားသည်။ ဒီတစ်ခါတော့ ပထမတစ်ခါလို ဘေးတိုက်အနေအထားနှင့် မဟုတ်ဘဲ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး မျက်နှာချင်းဆိုင် အနေအထားနှင့် ဖြစ်သည်။ ဇွဲတစ်ယောက် စိတ်လှုပ်ရှားနေသလို၊ သူ့ကံကြမ္မာကိုလည်း အံ့သြမိသည်။ ဤဘဝတစ်သက်တာတွင် ဘော့စ်ရဲ့ သရဖူမယားဖြစ်သူ ဒေါ်နန်းယမုံအား နမ်းရလိမ့်မည်ဟု ဘယ်တုန်းကမှ ထင်မထားခဲ့ပါ။ ဇွဲ၏ ခေါင်းက ရှေ့တိုးရင်း ငုံ့ကျသွားသလို၊ နန်းယမုံ၏ မျက်နှာလေးက မော်ပေးရင်း ရှေ့သို့ တိုးလာသည်။
ခြေတစ်လှမ်းချင်း တိုးလှမ်းလိုက်ကြသည့် သူတို့နှစ်ယောက်စလုံး .. မျက်နှာချင်း မထိခင် နန်းယမုံ၏ မောက်ထွက်နေသော ရင်ဆိုင်တွေနှင့် ဇွဲရင်ဘတ် အရင်ဦးဆုံး ပွတ်တိုက်မိသည်။ ထို့နောက်မှ နှစ်ဦးသား နှုတ်ခမ်းများ ဖြေညင်းစွာ ထိတွေ့သွားသည်။ (အင်း) စိတ်လှုပ်ရှားလွန်းလို့ လည်ချောင်းထဲက လျှံထွက်လာသော ညည်းသံကို အပြင်မရောက်အောင် ဇွဲ တော်တော်ထိန်းလိုက်ရသည်။ ကင်မရာကိုင်ထားသော တုန်ယင်နေသည့် လက်အား ငြိမ်အောင် ကြိုးစားပြီး ဓါတ်ပုံတစ်ပုံကို မြန်မြန်ရိုက်လိုက်သည်။ ကလစ်ဆိုသော အသံကြားတော့ နန်းယမုံက နောက်သို့ အမြန်ပြန်ဆုတ်သည်။ သူတို့နှစ်ယောက် လူချင်း ပြန်ကွာသွားသည်။
“ပြပါဦး .. မမကို” “ဟုတ်” ကင်မရာကို ယူလိုက်သည် မဟုတ်ဘဲ ဇွဲဘေးနားကနေသာ လှမ်းကြည့်သဖြင့် သူတို့နှစ်ယောက် လူချင်းပြန်ပူးသည်။ ဇွဲ ကိုယ့်ကိုကိုယ် သတိပေးရင်း ဗီဒရိုမျက်နှာပြင် ကိုသာ နန်းယမုံကြည့်သလို လိုက်ကြည့်သည်။ တကယ်ကို သူနှင့် နန်းယမုံ နှုတ်ခမ်းတွေက ထိတွေ့ပူးကပ်နေသည်။ သို့သော် တစ်ခုခု လိုအပ်နေမှန်း ကြည့်လိုက်တာနှင့် သိသာနေပြန်သည်။ “ဆိုးတော့ မဆိုးဘူး .. ဒါပေမယ့် ဒီလောက်နဲ့ ဒင်းတို့ ဂျဲလက်စ် မဖြစ်လောက်ဘူးနဲ့ တူတယ် .. မမတို့ ပိုပြီး ပက်စ်ရှင် လိုမလား မသိဘူး” “ဟုတ်တာပေါ့ မမ” “ဒါဆို .. ထပ်စမ်းကြည့်ရအောင်” ဒီတစ်ခါတော့ ဇွဲတစ်ယောက် နောက်တွန့်မနေတော့ပါ။ စောစောတုန်းကတော့ ဒေါ်နန်းယမုံကို သူဌေးကတော်ဆိုသော အရှိန်အဝါနှင့် ရှိန်နေခဲ့သည်။
အခုတော့ ဇွဲ စိတ်ထဲတွင် ဒီအတွေးတွေ မရှိတော့ပါ။ သူ့ကံ ဘယ်လောက် ထပ်ကောင်းနိုင်ဦးမလဲဆိုတာကို လက်တွေ့ စမ်းချင်လာသည်။ နန်းယမုံ အနားတိုးလာသည်တွင် သူကပင် လက်ဦးအောင် သူမခါးလေးအား လှမ်းဆွဲပြီး နှုတ်ခမ်းတွေကို သာသာလေး ဖိနမ်းပစ်လိုက်သည်။ ချိုမြသင်းရီသော အနမ်း၏ အရသာက နန်းယမုံ၏ နှုတ်ခမ်းများမှ တဆင့် ဇွဲ ကိုယ်ထဲသို့ စီးဆင်းသွားသည်။ ရင်ခွင်ထဲ ရောက်နေသော နန်းယမုံ၏ ကိုယ်လေးက တောင့်တောင့်လေး ဖြစ်နေသည်ဆိုတာကို ဇွဲ သတိထားမိသည်။ နှုတ်ခမ်းထောင့်တွန့်ကာ မခိုးမခန့်ပြုံးလိုက်ပြီး ထိကပ်ထားသော နှုတ်ခမ်းနှစ်ခုကြားတွင် သူ့လျှာလေးအား ထိုးထည့်လိုက်သည်။ “အင်” ဆိုသော အသံလေး ကြားလိုက်ရပြီး သူ့လျှာက နန်းယမုံရဲ့ နှုတ်ခမ်းလွှာနှစ်ဖက်ကို ဖြတ်သန်းပြီး ပါးစပ်လှလှထဲ ရောက်သွားသည်။ နန်းယမုံ ကိုယ်ကလေး ဆတ်ခနဲ တုန်သွားပြီး ဇွဲ၏ ရင်ခွင်ထဲမှ ရုန်းထွက်သည်။
အလိုက်သင့်ပင် သူလွှတ်ပေးလိုက်သည်။ သို့သော် နှုတ်ခမ်းချင်း မကွာသေးခင် သူမလျှာလေးအား သူ့လျှာနှင့် တစ်ချက်ရအောင် လှမ်းပွတ်ဆွဲလိုက်သည်။ “ရ .. ရပြီထင်တယ်” အနည်းငယ် အသက်ရှူမမှန်သည့် အသံနှင့် နန်းယမုံ ဇွဲအား လှမ်းပြောသည်“နမ်းတာတော့ ရပြီ .. မမ ဘာဆက်လုပ်မှာလဲ” ကင်မရာ စကရင်ထဲက အရအမိ ရိုက်ထားသော ပုံကို ဇွဲ လှမ်းပြသည် “မမ မပြောတတ်ဘူး .. ဇွဲ” နန်းယမုံ၏ မျက်လုံးတွေက စိတ်ရှုပ်ထွေးဟန်နှင့် မတည်မငြိမ် ဖြစ်နေရှာသည်။ သူမကို လိုက်ကြည့်နေသော ဇွဲကိုတောင် တန်ပြန် မကြည့်နိုင်ရှာ။ နန်းယမုံ၏ အကြည့်က စားပွဲပေါ်တွင် တင်နေသော ဓါတ်ပုံများကို ငေးကြည့်သွားမိသည်။
ထိုခဏတာအတွင်း သူမ မျက်ဝန်းထဲတွင် အရောင်မျိုးစုံ လင်းလက်သွားသည်။ “မမ စိတ်မဆိုးဘူးဆိုရင် ကျနော် အကြံတစ်ခုပေးမယ် .. ” “ပြော .. ဇွဲ .. ဘာလဲ ??” “မမ ဝတ်စုံရဲ့အပေါ်ပိုင်းကို ခန ဖယ်လိုက်ပါလား” ဒီစကားကြောင့် နန်းယမုံ၏ လက်က သူ့ပါးပေါ် ဖြောင်းခနဲ ကျလာမလားဟု ဇွဲ ရင်တထိတ်ထိတ်နှင့် စောင့်ကြည့်နေလိုက်သည်။ သို့သော် သူထင်သလို မဖြစ်ပါ။ နန်းယမုံ၏ ပုံစံက တွေဝေတွန့်ဆုတ်နေဟန်သာ ရှိသည်။ မထူးတော့သည့်အဆုံး ဇွဲလည်း ဆေးတစ်လုံးလောက် ထပ်ထိုးပေးလိုက်သည်။“ဘော့စ်နဲ့ ချောချောငယ်တို့ကို ပိုပြီး ဆွေ့ဆွေ့ခုန်တဲ့အထိ ဒေါသထွက်စေချင်တယ်ဆိုရင်တော့ နမ်းတဲ့အဆင့်ထက် ပိုမှ ဖြစ်မယ် .. မမ” ဇွဲ၏ ဒီစကားက တော်တော် တာသွားပါသည်။
အထူးသဖြင့် ဘော့စ်နှင့် ချောချောငယ်ဆိုသော အသုံးက နန်းယမုံ၏ စိတ်ကို ဆွပေးလိုက်ဟန်ရှိသည်။ တစ်ခုခုကို ဆုံးဖြတ်လိုက်ဟန်နှင့် ခေါင်းကို ဆတ်ခနဲ ညိတ်ပြရှာသည်။ “ဟုတ်တယ် .. မင်းဘော့စ်က မမ ရင်သားတွေကို သိပ်ကြိုက်တာ .. တခြား ယောက်ျားတစ်ယောက်သာ ဒါတွေကို ထိတွေ့နေတယ်ဆို သေချာပေါက် ဒေါသထွက်လို့ နေရာမှာတင် နှလုံးရပ်သွားနိုင်တယ် .. ကောင်းပြီလေ .. မင်းပြောသလို လုပ်ကြတာပေါ့” လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်နှစ်လောက်ကသာ ဒီစကားကို ဇွဲကြားမည်ဆိုလျှင် ပျော်လွန်းလို့ ထပဲခုန်မိမလား၊ နောက်ကျွမ်းတွေဘာတွေပဲ ထိုးမိမလား မသိ။ အခုတော့ ရင်ထဲအပျော်စိတ်ကို မျက်နှာပေါ် တက်မလာအောင် မနည်းထိန်းနေရသည်။ ထိုသို့ မိမိခံစားချက်ကို ရုပ်တည်ကြီးနှင့် ထိန်းသိမ်းရသည်မှာလည်း ကြီးစွာသော ဒုက္ခဆိုသည်ကို စာဖတ်သူလည်း ဇွဲနေရာရောက်လျှင် နားလည်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ ဇွဲတစ်ယောက် နေရာကနေ တုတ်တုတ်မျှကို မလှုပ်မိပါ။
သေချာသာ ကြည့်လျှင် သူ့တကိုယ်လုံးတွင် လှုပ်ရှားနေသာ အရာသည် နန်းယမုံ၏ လက်ကလေးများ လှုပ်ရှားရာသို့ ထပ်ချပ်မကွာ လိုက်ကြည့်နေသော မျက်ဝန်းများသာ ရှိနေပေသည်။ လည်တိုင်ကျော့ကျော့တွင် ပတ်ထားသော ပုဝါ ၏ အစနှစ်ဖက်ကို ဖြုတ်လိုက်သည်နှင့် ရင်သားမို့မို့များအား စည်းနှောင်ထားသော အဖြူရောင်ဘရာက အပြင်ကို ထင်းထင်းလင်းလင်းပင် ထွက်လာသည်။ နန်းယမုံသည် ခေတ်မှီလွန်းလှသည်ကို ဒီနေရာတွင် ဇွဲ တွေ့လိုက်ရသည်။ သူမ ဝတ်ထားသော ဘရာသည် ဇာလွှာများဖြင့် ဖန်တီးထားသော ပုံဆန်းဘရာမျိုးဖြစ်သည်။ ဘရာတစ်ခုလုံးတွင် ဇာလွှာများက အများစု ဖြစ်သဖြင့် နို့လုံးဖွေးဖွေးတွေကို အတိုင်းသား မြင်နေရသည်နှင့် မခြားပါ။ နို့သီးခေါင်းလေးများကို မမြင်ရသည့်တိုင် ပန်းနုရောင် နို့ကွင်းဝိုင်းလေးများကိုတော့ ရိုးတိုးရိတ်တိတ် မြင်နေရသေးသည်။ “ဝိုး !!” (အံ့သြမှုကို မထိန်းနိုင်ဘဲ ဇွဲ ရေရွတ်မိသွားသလို၊ လက်ထဲကိုင်ထားသော ကင်မရာ၏ ခလုတ်ကိုလည်း ကလစ်ခနဲ မြည်အောင် နှိပ်မိသည်) “ဝိုး လုပ်မနေနဲ့ … ဇွဲ .. လက်နဲ့ကိုင်ထားတဲ့ ဓါတ်ပုံ မြန်မြန်လာရိုက်” ဘာပြောကောင်းမလဲ။
ဒါမျိုးတော့ ဇွဲတို့အတွက် နှစ်ခါပြန် ဖိတ်ခေါ်နေစရာမလို။ မသိမသာတုန်နေသော လက်တွေနှင့်ပင် ရင်သားဖွံ့ဖွံ့ထွားထွား တစ်ဖက်ကို ဘရာပေါ်ကနေ လှမ်းကိုင်လိုက်သည်။ ကြီးမားသလောက် အိစက်နွေးထွေးသည့် အထိအတွေ့က သူ့လက်ဖဝါးပြင်ပေါ်သို့ ကူးစက်ကာ ရောက်လာသည်။ နန်းယမုံ၏ နို့လုံးကြီးတစ်ဖက်ကို ကိုင်ထားရင်း ဇွဲ ကျန်သည့်လက်တစ်ဖက်နှင့် ဓါတ်ပုံတွေ တဖြတ်ဖြတ် ရိုက်သည်။ စိတ်ထဲမှလဲ ဘာဖြစ်လို့ ဘော့စ်က ကင်မရာထောက်တံကို သိမ်းမထားတာလဲဟု လှမ်းအပြစ်တင်လိုက်သေးသည်။ ထောက်တံသာ ရှိလျှင် ကင်မရာကို အော်တိုချိန်ထားလိုက်ယုံသာ၊ ဒါဆို သူ့လက်နှစ်ဖက်စလုံးနှင့် ဖျဲသီးအရွယ်ရှိသည့် နို့လုံးဖွေးဖွေးကြီးတွေကို အားရပါးရ ကိုင်တွယ်လို့ရမှာဖြစ်သည်။
နန်းယမုံ၏ နို့လုံးတွေကလည်း တကယ်ကို သဘောကျချင်စရာကောင်းပါသည်။ ဇွဲ၏ လက်တစ်ဖဝါးတောင် ကောင်းကောင်း မအုပ်နိုင်ချင်။ နူးညံ့မှုနှင့်အတူ အိတင်းမှုကလည်း ထပ်တူတွဲ၍ ရှိနေသည်။ တော်တော်တော့ ဖော်ပြရခက်သော အတွေ့ဖြစ်သည်။ သို့သော် ထိုအတွေ့က တပ်မက်မောဖွယ်ရာ အပြည့်လည်း ဖြစ်နေသဖြင့် ဇွဲတစ်ယောက် ကိုင်ထားလျက်က မသိမသာပင် ညှစ်မိသွားသည်။ နန်းယမုံ ကိုယ်က တွန့်သွားပြီး ဘရာပေါ်က သူ့လက်ကို ဖယ်ထုတ်လိုက်သည်။ “ဓါတ်ပုံတွေပြဦး .. ဇွဲ” မလွှတ်ချင်လွှတ်ချင်နှင့် လွှတ်ပေးလိုက်ရသည့် ဇွဲ .. ကင်မရာကို ထိုးပေးလိုက်သည်။ နန်းယမုံက ကင်မရာကို ကြည့်နေခိုက်၊ သူ့မျက်လုံးတွေကမူ နို့လုံးအိအိကြီးတွေထံပါးမှ တစ်ချက်ကလေးမှ မလွှဲ။ မျက်တောင်တောင် ခတ်မိရဲ့လား မသိ။ ကင်မရာကို ဇွဲလက်ထဲ ပြန်ပေးလိုက်ပြီးနောက် နန်းယမုံက အလုပ်စားပွဲကြီးနားသို့ ကပ်သွားသည်။
ဝတ်စုံ၏ အပေါ်စနှစ်စကိုလည်း လည်တိုင်မှာ ပြန်ပတ်လိုက်ရာ ဇွဲ အလွန်အမင်း တပ်မက်နေသော ရွှေရင်ဖွေးဖွေးကြီးတွေက သူ့မြင်ကွင်းမှ ပျောက်သွားသည်။ ကလေးငယ်တစ်ယောက် သကြားလုံးဗူးပျောက်သွားသလို ဇွဲ ခံစားလိုက်ရသည်။ ဟုတ်သည်လေ။ ဒီအလုံးဖွေးဖွေးကြီးတွေကို အားရပါးရမှ မနယ်ရသေးတာ ..။ “ကျ .. ကျနော်တို့ ပြီးပြီလား မမ” မနေနိုင်တော့သည်အဆုံး သူ့ကို ကျောပေးကာ ထားသည့် နန်းယမုံကို နောက်ကနေ လေသံတိုးတိုးလေးနှင့် မေးမိသည်။ နန်းယမုံက ဇွဲကို ချက်ချင်း ပြန်အဖြေမပေးပါ။ စားပွဲပေါ်တွင် ရှိနေသော ဦးမိုးလုံးဟိန်းတို့အတွဲ၏ ဓါတ်ပုံတွေကို စူးစိုက်ကြည့်နေသည်။
တအောင့်နေမှ “မပြီးသေးဘူး .. ပြီးဖို့ အဝေးကြီးလိုသေးတယ် .. ဇွဲ” “….” “ဇွဲ .. အဲဒီ ကင်မရာနဲ့ မူဗွီရိုက်လို့ရလား” “ရတယ် .. မမ” (နန်းယမုံ စိတ်ထဲတွင် ဘာတွေးနေသည်ကို ဇွဲ မခန့်မှန်းမိပေမယ့် ချက်ချင်းခေါင်းညိတ်ကာတော့ အဖြေပေးလိုက်သည်) “အိုကေ .. ကောင်းတယ် .. ဒါဆို အခုစပြီး ရီကော့လုပ်လိုက်” ပြောပြီးသည်နှင့် နန်းယမုံက ဇွဲရှေ့သို့ လျှောက်လာသည်။ သူမဘာလုပ်မှာလဲဆိုတာ မသိခင်မှာပင် သူ့ရှေ့တွင် ဒူးထောက်၍ ထိုင်ချလိုက်သည်ကို တွေ့ရသည်။ အံ့အားသင့်ပြီး ဇွဲ ငုံ့ကြည့်မိခိုက် နန်းယမုံ၏ သွယ်ပြောင်းသော လက်တစ်စုံက ဘောင်းဘီခါးပတ်ခေါင်းအား လှမ်းကိုင်လိုက်သည်။
“မ .. မ .. ဘာလုပ်မလို့လဲ” “မေးမနေနဲ့ … မင်း .. မင်းကောင်မ အတွက် ပြန်တုံ့ပြန်ချင်တယ် မဟုတ်ဘူးလား” “အာ .. ဟုတ် … အိုကေ” ကင်မရာကို ကိုင်ထားရင်းနှင့် ဇွဲ ငြိမ်ငြိမ်သက်သက် ရပ်ပေးနေလိုက်သည်။ လှုပ်ရှားစရာ ရှိသမျှ နန်းယမုံကသာ ဦးဆောင်၍ ပြုလုပ်သည်။ ဘောင်းဘီက သူ့ခြေရင်းတွင် ပုံသွားသောအခါ နန်းယမုံလက်က ဖောင်းဖောင်းကြီးဖြစ်နေသော အတွင်းခံဆီသို့ ရောက်လာသည်။ ဇွဲ .. ကင်မရာကို ဗွီဒီယိုသို့ ပြောင်းလိုက်ပြီး စတင် ရိုက်ကူးသည်။ အရင်ဆုံး ကင်မရာမြင်ကွင်းထဲတွင် ပေါ်လာတာက ဖြူဖွေးသွယ်တန်းသော လက်ကလေး၊ ထိုလက်ကလေးရဲ့ လက်သူကြွယ်နေရာတွင်တော့ တလက်လက်တောက်နေသော စိန်လက်စွပ် .. နန်းယမုံရဲ့လက်ထပ်လက်စွပ်၊ ဖောင့်ဖယောင်းပမာ လှပသော သူမရဲ့လက်ချောင်းကလေးများနှင့် ထိစပ်နေသည်က အတွင်းခံဘောင်းဘီအောက်က သူ့လီးကြီး။ ဇွဲတစ်ယောက် နားထင်တွေ ရှိန်းခနဲ ဖြစ်လာသည်အထိ ခံစားလိုက်ရသည်။
“အိုး .. အမေ့ !!” ယောက်ျားတွေ၏ လိင်အင်္ဂါနှင့် ပတ်သက်ပြီး နန်းယမုံ မည်မျှ အတွေ့အကြုံရှိသည်တော့ မသိ။ သူ့လီးအား ဘောင်းဘီကြိုးကို ဖယ်၍ ဆွဲထုတ်လိုက်သည်တွင် ယောင်ယမ်း၍ ရေရွတ်လိုက်သံလေးကမူ ဇွဲအတွက် နားဝင်ချိုလှသည်။ စာတွေမှာ ရေးထားသည့်အတိုင်းသာဆိုလျှင် ကိုယ့်ပေါင်ကိုယ် ပြန်ဆိတ်ကြည့်ရမည့်ကိန်း။ ဒါအိပ်မက်များလား .. ကိုယ်တိုင်မြင်နေရသည့် ကိုယ့်မျက်လုံးတွေကိုတောင် မယုံနိုင်ပါ။ တကယ်ကို မိုက်သည့်၊ ဆက်ဆီကျလှသည့် မမလှလှ နန်းယမုံ၏ လက်ထဲတွင် သူ့လီးက ရောက်ရှိနေသည်။ “မမ မျက်နှာကို ပါအောင် ရိုက်ဦး .. အဲဒီတော့မှ မင်းလီးကို ကိုင်ထားတာ မမဖြစ်မှန်း ဒင်း သိမှာ” လီးကိုကိုင်၍ ဖြေးဖြေးသာသာ ဆုပ်စွဲနေသော လက်ကစ၍ တဖြေးဖြေးခြင်း ကင်မရာကို နန်းယမုံ၏ မျက်နှာရှိရာသို့ ရွှေ့သွားသည်။
နန်းယမုံ၏ လှပသော မျက်ဝန်းတွေထဲတွင် ထူးဆန်းသည့် အရိပ်အယောင်တွေ လဲ့ဖြာနေသည်။ သူမ ဘာတွေ တွေးနေလဲဆိုတာကို ဇွဲ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့ အချိန်မအားပါ။ အပေါ်စီးကနေပြီး လှမ်းမြင်နေရသော နို့လုံးဖွေးဖွေးတွေ၏ ထိပ်ပိုင်းအား ကင်မရာကို ဆွဲ၍ လှမ်းချိန်လိုက်သည်။ “အား .. ရှစ် .. ကောင်းတယ်” မာကြောနေပြီဖြစ်သော လီးတန်ကို လက်တစ်ဖက်နှင့် ဆုပ်ကာ ဂွင်းတိုက်ပေးနေရာမှ၊ နန်းယမုံက ကျန်နေသည့် လက်တစ်ဖက်နှင့် သူ့ဂွေးဥတွေကို ရွရွလေး လှမ်းကိုင်သည်။ လက်ဖဝါးလေးထဲတွင် ထည့်ပြီး လက်ချောင်းလေးများဖြင့် မာဆက် လုပ်သလို နှိပ်နယ်ပေးသောအခါ ဇွဲတစ်ယောက် မျက်လုံးများ မှေးကျသည်အထိ ဖီလင်တက်သွားသည်။ ဘယ်လိုမှ မနေနိုင်တော့ဘဲ ကင်မရာ မကိုင်ထားသည့်လက်နှင့် နီးစပ်ရာ နို့ကြီးတစ်လုံးကို လှမ်းဆွဲမိ၏။
“အိုး !!” “ဆောရီး .. မမ” “ရတယ် .. ကင်မရာကို သေချာကြည့်ဦး” “ဟုတ် .. မမ သေချာရိုက်ထားတယ်” ခံစားမှုဖီလင်နောက်သို့ မျောသွားသည့် ဇွဲ .. နန်းယမုံ၏ သတိပေးသံကြောင့် ကင်မရာကို တည်ငြိမ်အောင် ပြန်ထိန်းကိုင်လိုက်သည်။ အောက်ကိုငုံ့ကြည့်လိုက်သည့်သူနှင့် အပေါ်ကို မော့ကြည့်နေသော နန်းယမုံ အကြည့်ချင်းဆုံသွား၏။ သူကြည့်နေခိုက် နန်းယမုံတစ်ယောက် အသက်ပြင်းပြင်းတစ်ချက် ရှူလိုက်သည်ကို သတိထားမိသည်။ “ဇွဲ .. မနက်ကတုန်းက မင်း ရေချိုးလာခဲ့တယ် မှတ်လား” “ဟုတ်တယ် .. မမ … ဘာဖြစ်လို့လဲ” (သူ့ကိုယ်ကများ အနံ့အသက် ထွက်နေလို့လားဟု ဇွဲ တွေးမိသည်။ သို့သော် သူ့အတွေးမှားသည်ကို ချက်ချင်း သိလိုက်လေသည်) “မိုး .. လုံး .. ဟိန်း .. ကျမ လုပ်သမျှကိစ္စတွေ အားလုံးဟာ ရှင့်ကြောင့်ဖြစ်လာတာ .. ရှင့်အပြစ်တွေကြီးပဲ” ကင်မရာကိုကြည့်ကာ ပြောသော ထိုစကားအဆုံးသတ်နှင့်အတူ နန်းယမုံ၏ နှုတ်ခမ်းလှလှလေးက ဟသွားပြီး လျှာနီနီချွန်ချွန်လေးက ထွက်လာကာ ဒစ်လုံးကြီးကို လှမ်းလျက်သည်။ ဒစ်ထိပ်နှင့် စိုစွတ်သော လျှာထိပ်လေး ထိမိမှုက နန်းယမုံလက်ထဲရှိ လီးတန်ကို ထောင်းခနဲ ရုန်းထစေသည်။
ထိပ်ဖူးဝတွင် စို့ထွက်နေသော အရည်ကြည်လေးက နန်းယမုံ၏ လျှာဖျားလေးတွင် တွဲခို၍ ပါသွားသည်။ “ကောင်းတယ် .. မမရယ် .. ကောင်းတယ် .. လျက် လျက်ပေးပါဦး” ဒင်ပြည့်ကျပ်ပြည့် မာနေပြီဖြစ်သော လီးတန်ကြီး၏ အရင်းပိုင်းကို လက်နှင့်ဆုပ်ကိုင်လိုက်ပြီးနောက် လွတ်ထွက်နေသည့် ထိပ်ပိုင်းတလျှောက် နန်းယမုံ၏ လျှာနီနီလေးက ရွေ့လျားနေသည်။ အောက်ဆင်းသွားလိုက်၊ အပေါ်တက်လာလိုက်နှင့် အစုန်အဆန် လှုပ်ရှားပြီးနောက်၊ ထိပ်ဖူးလုံးကြီးဆီ ပြန်အရောက်တွင် ပါးစပ်ကို အစွမ်းကုန်ဟ၍ ငုံ့လိုက်သည်။ ထို့နောက် ခေါင်းကို ဖိချလိုက်သည်တွင် နူးညံ့သောနှုတ်ခမ်းလေးများကို တွန်းတိုက်၍ လီးဒစ်က ပါးစပ်ပေါက်ထဲသို့ ဝင်သွားသည်။ “အား .. အရမ်းကောင်းတယ် … မမ” ပြွတ်ခနဲ မြည်သံနှင့်အတူ လီးထိပ်က နန်းယမုံ ပါးစပ်အတွင်းမှ ပြန်ထွက်လာသည်။
လီးကို ၉၀ဒီဂရီထောင်မတ်နေအောင် ကိုင်ထားရင်း လက်ဖဝါးနှင့်ဆုပ်ကာ ဂွင်းတိုက်ပေးသည်။ မျက်နှာလှလှလေးက မော့တက်လာပြီး ဇွဲအား ထင်မှတ်မထားသည့် မေးခွန်းတစ်ခုကို မေးလိုက်သည်။ “မမနဲ့ မင်းကောင်မ .. ဘယ်သူစုပ်ပေးတာ ပိုကောင်းလဲ” ဇွဲ၏ အသိအာရုံတွင် လောလောဆယ် ကြီးစိုးထားသည်က နန်းယမုံသာ ရှိသဖြင့် သူ့ကောင်မဆိုသော ရည်ညွှန်းချက်ကို မနည်းတောင် ပြန်စဉ်းစားလိုက်ရသည်။ နောက်တော့မှ ချောချောငယ်ကို ပြောမှန်းသိလိုက်သည်။ ချောချောငယ်ရဲ့ အစုပ်အမှု (ဘလိုးဂျော့)က ဘယ်လောက်ကောင်းသည်မှန်း ဇွဲ မသိ။
သို့သော် နန်းယမုံ၏ ဘလိုးဂျော့က မတရားကောင်းနေသည်မှန်းတော့ ဇွဲ သိနေသည်။ “မမက ပိုကောင်းတာပေါ့” (ဇွဲ စိတ်ထဲမှာတော့ သေချာသိအောင် နှစ်ယောက် ပြိုင်တူ စုပ်ပေးတာ ခံရလျှင် ကောင်းမည်ဟု ဖြတ်ခနဲ တွေးလိုက်သေးသည်) နန်းယမုံကတော့ ဇွဲ၏ အတွေးကို သိနိုင်စွမ်း မရှိပါ။ သူမက ပိုသာသည်ဆိုသောအချက်ကြောင့် ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားသည့် အသွင်ပြောင်းသွားပြီး ခေါင်းကို ချက်ချင်းပင် ပြန်ငုံ့၍ လီးကို အားရပါးရစုပ်သည်။ ကောင်းမွန်လှသည့် ခံစားချက်များက လီးတန်တလျှောက်မှ တဆင့် ဇွဲ ကိုယ်အနှံ့ ပြန့်၍ စီးဝင်သွားသည်။ လက်တစ်ဖက်နှင့် နန်းယမုံ၏ ခေါင်းကို လှမ်းကိုင်ပြီး ဖိချမိသည်။ နူးညံ့အိထွေးသော ပါးစောင်သားလေးများ၏ အထိအတွေ့ကြောင့် လီးတန်တစ်ချောင်းလုံးကို နန်းယမုံ ပါးစပ်ထဲ သွင်းပစ်လိုက်ချင်တော့သည်။
“အား .. ကောင်းတာ မမ” “အု .. အု” “မမ .. ဒိသရုပ် လုပ်ဖူးလား ??” နန်းယမုံ ကိုယ်လုံးလေး ဆတ်ခနဲ တုန်သွားပြီး၊ ပါးစပ်ထဲမှလည်း လီးတန်က ကျွတ်ထွက်လာ၏။ ခေတ်မှီသည့် အမျိုးသမီးတစ်ယောက်မို့ ဒိသရုပ်ဆိုသည်မှာ လိင်တန်ကို အဆုံးထိ ပါးစပ်ထဲသို့ သွင်း၍ စုပ်ပေးခြင်းမှန်း နန်းယမုံ နားလည်ပါသည်။ သို့သော် သူမယောက်ျား ဦးမိုးလုံးဟိန်းနှင့်တောင်မှ ဒီလိုမျိုး တခါမှ မစမ်းဘူးပါ။ ဦးမိုးလုံးဟိန်း၏ လိင်တန်ကို စုပ်ပေးသည်ဆိုတာကလည်း အမြဲတမ်းရယ်လို့ မဟုတ်။ သူမ စိတ်ပါသည့်အချိန်နှင့် ဦးမိုးလုံးဟိန်း အလွန်အမင်း ဆန္ဒရှိချိန်သာ ဖြစ်သည်။ အခုတော့ သူမယောက်ျား၏ လူယုံကောင်လေးက သူ့လီးကို ဒိသရုပ်လုပ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုနေပြီ။ သူမ ဘာလုပ်ရမည်နည်း …. ။
ကင်မရာ ကိုင်ထားသော လက်ကို သူ့မျက်နှာဘက်သို့ လှည့်လိုက်ပြီး ဇွဲတစ်ယောက် မခိုးမခန့် ပြုံးရင်း စကားကို တစ်လုံးချင်း ပြောနေသည်။ “ဒီမှာ ဘော့စ် .. ခင်ဗျား မိန်းမရဲ့ပါးစပ်ထဲကို ခင်ဗျား လီးအကုန် သေချာပေါက်မထည့်ဖူးဘူး မှတ်လား .. ဘယ်ထည့်ရမလဲ .. ခင်ဗျားကြီးက သူ့နောက်ကွယ်မှာ ဖောက်ပြန်နေတာကိုး .. အခု ခင်ဗျား မရတဲ့ အခွင့်အရေးကို ကျနော် ရပြီ .. မမ က ကျနော့်လီးကို ဒိသရုပ်လုပ်ပေးတော့မယ် … ဒီမှာ ကြည့် ..” ဇွဲပြောလိုက်သည့် စကားတွေ အားလုံးကို လုံးစေ့ပတ်စေ့ နန်းယမုံ ကြားလိုက်ပါသည်။
သူမ ဦးနှောက်က ထိုအချက်များကို လက်ခံသင့်၊ လက်မခံသင့် ဝေခွဲမရဖြစ်နေသည်။ သို့သော် ဇွဲ၏ လက်က သူမခေါင်းကို အသာကိုင်ပြီး ဖိချလိုက်သည်တွင်တော့ ပါးစပ်ကို အလိုလိုဟပေးမိသွားသည်။ ထို့နောက်တွင်တော့ သူမ၏ သဘာဝဗီဇ က ကြီးစိုးသွားပြီး နှုတ်ခမ်းများကို လီးတန်လုံးပတ်၏ အောက်ခြေပိုင်းနှင့် ထိနိုင်အောင် ကြိုးစားလိုက်သည်။ ထိပ်ဖူးလုံးလုံးကြီးက အာခေါင်ကို ကျော်၍ လည်ချောင်းဝသို့ ရောက်လာသောအခါ ပျို့ချင်သလို ဖြစ်သည်။ အသက်ရှူရခက်သလို ဖြစ်သည်။ မြန်မြန်ဆန်ဆန် ပြန်ထုတ်လိုက်သည့်တိုင် ချောင်းတဟွတ်ဟွတ် ဆိုးသည်။
“အားမလျှော့နဲ့ မမ ရတော့မှာ … နဲနဲပဲ လိုတော့တာ” တကယ်တော့ တော်တော်လိုပါသေးသည်။ ဇွဲ လုပ်ခဲ့ဖူးသမျှ ကောင်မလေးတိုင်းတောင်မှ ဘယ်သူမှ သူ့လီးကို အကုန်ငုံနိုင်တဲ့သူ မရှိခဲ့ပါ။ သို့သော် ဇွဲ၏ အားပေးမှုကို နန်းယမုံက အသိအမှတ်ပြုဟန်နှင့် ခေါင်းညိတ်ပြပြီး လက်ခံသည်။ ပြီးနောက် အသက်ကို၀၀ရှူသွင်းလိုက်ပြီး သူမပါးစပ်ကို လီးထိပ်ဖူးအား ပြန်ငုံ၍ ဖိချလိုက်ပြန်သည်။ အသက်ကိုဝအောင် ရှူထားခဲ့သည့်အတွက် လီးဒစ်က လည်ချောင်းထဲဝင်လာသည့်အချိန်တွင် အစောတုန်းကလို မဖြစ်တော့။ ပျို့ချင်သလို ဖြစ်နေသည့် အခံတော့ ရှိနေသေးပေမယ့် ထိုစိတ်ကို ထိန်းပြီး လည်ချောင်းအတွင်းသားတွေကို ဖြေလျှော့ကာ ငှက်ပျောသီး မျိုချသလို မျိုလိုက်သည်။ လီးတန်လုံးပတ်ကို ဖိပွတ်နေသော နှုတ်ခမ်းသားများက အောက်ဘက်သို့ ရွေ့သွားပြီး နန်းယမုံ၏ နှာတံချွန်ချွန်လေးက လီးအရင်းတွင် ပေါက်နေသော အမွှေးတွေနှင့် ရောယှက်သွားသည်။
သူမ မေးလေးကမူ ဖောင်းကားနေသာ ဂွေးဥများနှင့် သွားထိသည်။ “ဝိုး … ရေး .. မိုက်တယ် မမ” ဇွဲတစ်ယောက်တော့ နတ်ပြည်ခြောက်ထပ်သို့ အရှင်လတ်လတ် ရောက်နေသလိုကို ခံစားရသည်။ နန်းယမုံ၏ ခေါင်းကို နောက်ဘက်မှ ထိန်းကိုင်ထားရင်း ချက်ချင်း ပြန်ကြွတက်မလာအောင် စက္ကန့်ပိုင်းလောက် ဖိထားသည်။ လီးဒစ်ဖူးနှင့် လည်ချောင်းသားအိအိတွေ ထိတွေ့နေမှုသည် ပြောမပြနိုင်အောင် ကောင်းလွန်းလှသည်။ ခနကြာမှ ဖိထားမှုကို လွှတ်ပေးလိုက်သည်။ “မမ .. လုပ်နိုင်တယ် .. ရေး !!!” အင်မတန်မှ ကျေနပ်အားရသံနှင့် ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ ကြွေးကြော်နေသည့် နန်းယမုံကြောင့် ဇွဲတောင် အူကြောင်ကြောင်ဖြစ်ပြီး အသံတိတ်သွားရသည်။ သူမ စုပ်နေသော လီးသည် ဘယ်သူ့လီးဆိုတာကိုရော နန်းယမုံတွေးမိပါရဲ့လား မသိ ..။
နောက်ထပ်ဘာမှ ထပ်မံတိုက်တွန်းစရာ မလိုလိုက်ဘဲ နန်းယမုံက သူ့လီးကို ပြန်၍ ငုံစုပ်သည်။ ဒီတစ်ကြိမ်တွင်တော့ နည်းစနစ်ကို သိနားလည်သွားပြီ ဖြစ်သည်မို့ တစ်ချက်ထဲနှင့်တင် လီးက သူမပါးစပ်ထဲ ပျောက်ကွယ်သွားသည်။ နန်းယမုံ၏ နှာတံလေးက လီးမွှေးများကြား ပြန်လည်ရောက်ရှိသွားသည်။ နှာဝထဲသို့ လီးမွှေးအချို့ကပင် တိုးဝင်သွားရာ သူမ နှာခေါင်းကို ဘယ်ညာလှည့်ကာ ကစားပြီး ဖယ်ထုတ်လိုက်သည်။ “အိုး .. ရှစ်” ဇွဲတစ်ယောက် ဘယ်လိုမှ မထိန်းနိုင်တော့။
သူ့လိင်တန်သည် သံချောင်းတစ်ချောင်းလို တင်းမာနေပြီး၊ အချိန်ကိုက် ဗုံးသလို ပေါက်ကွဲဖို့ အသင့်ဖြစ်နေသည်။ နန်းယမုံ၏ ခေါင်းကို ဖမ်းကိုင်ပြီး ခါးကိုလှုပ်ကာ သူမပါးစပ်အား ဆောင့်လိုးမိတော့သည်။ နန်းယမုံက အလိုက်သင့်ပင် လည်ချောင်းကို ဖြေလျှော့ထားပေးယုံမက၊ လျှာလေးနှင့်လည်း အဝင်အထွက် ဖြစ်နေသော လီး၏ အောက်ဘက်ပိုင်းကို ပတ်၍ လျက်ပေးသည်။ နူးညံ့လှသော နန်းယမုံ၏ ပါးစပ်လှလှလေးထဲတွင် လီးတစ်ချောင်းလုံး ကုန်အောင် ထည့်ထားနိုင်သည့် ဖီလင်သည် ဇွဲအတွက်တော့ ဘာနှင့်မှကို မလဲနိုင်ပေ။ သူမပါးစပ်အား အရှိန်နှင့်လိုးနေသော ဇွဲအား မိနစ်ပိုင်းမျှ ကြာသည်အထိ နန်းယမုံ လွှတ်ပေးထားလိုက်၏။
နန်းယမုံ အနေနှင့် အစပိုင်းတုန်းက သူမအပေါ် ဖောက်ပြန်သည့် လင်ဖြစ်သူအား ပညာပေး လက်စားချေဖို့ရန် ဆုံးဖြတ်ထားခဲ့သော်လည်း ဒီလောက်အထိတော့ ဖြစ်သွားလိမ့်မည်ဟု မထင်ထားခဲ့။ အခုတော့ ဖြစ်ခဲ့သမျှကို နောက်ကြောင်းပြန်ဖို့ မလွယ်ကူတော့ပါ။ သူမအနေနှင့်လည်း ဒီအခြေအနေရောက်လာမှ နောက်ဆုတ်ဖို့လည်း မစဉ်းစားချင်တော့။ ရှေ့ဆက်တိုးဖို့ရန်သာ ဆုံးဖြတ်လိုက်တော့သည်။ “ဇွဲ .. နေဦး” ပြွတ်ဆိုသည့် အသံနှင့်အတူ လီးက ပါးစပ်ပေါက်ထဲမှ ကျွတ်ထွက်သွားရာ ဇွဲတစ်ယောက် တကယ်ကို ဖီးလ်အောက်သွားသည်။ နောက်ထပ် တစ်မိနစ်၊ နှစ်မိနစ်သာ ဆက်ဆောင့်ရလျှင် သူပြီးတော့မှာ သေချာနေသည်လေ။ “ဘာ .. ဘာဖြစ်လို့လဲ မမ??” အနည်းငယ် စိတ်ပျက်သံနှင့် မေးလိုက်သည့် ဇွဲ .. နန်းယမုံထံမှ အဖြေကြောင့် နေရာမှာတွင် ထခုန်ချင်သွားပြန်သည်။ အနည်းဆုံး တော့ လူက မခုန်မိတာတောင် လီးတန်ကြီးက ဆတ်ခနဲ ခုန်တက်သည်။
“တို့တတွေ ဖက်ခ် ကြရအောင် .. ဇွဲ” “မမ .. တကယ် ပြောနေတာလား” (အံ့အားသင့်ပြီးရင်း သင့်နေရသော ဇွဲ .. ဒီတခါတော့ သူ့မျက်လုံးတွေ ပန်းကန်ပြားဝိုင်းလောက် ကြီးသွားသည်ဟု ဆိုလို့ရသည်) “တကယ်ပြောနေတာ .. ဇွဲ .. ဒါ နောက်စရာ မဟုတ်ဘူး” ကြောင်တက်တက်နှင့် ကြည့်နေသော ဇွဲအား ခပ်ငေါက်ငေါက်လှမ်းပြောရင်း နန်းယမုံ ဒရက်စ်(ဝတ်စုံ)ရဲ့ အောက်အနားစကို လှမ်းဆွဲကာ ခါးထက်သို့ မတင်သည်။ ကြီးမားဖွေးဥသော တင်ပါးကြီးနှစ်ဖက်သည် ခပ်သေးသေး ပင်တီက ဖုံးမထားနိုင်သည့်နှယ် လုံးမောက်ကာ ပေါ်ထွက်လာသည်။ သူစိတ်ကူးယဉ်ထားသလို ဂျီစထရင်း ဝတ်ထားတာ မဟုတ်သည့်တိုင် ပင်တီသေးသေးလေးက တင်ပါးအထက်ပိုင်းကိုသာ ဖုံးထားနိုင်သည့် ဆက်ဆီကျသည့်အမျိုးအစားဖြစ်သည်။
ဇွဲ၏ လီးက ဆတ်ခနဲ ထခုန်ပြန်သည်။ မနည်းပင် ဖင်ကျောတွေကို အမြန်ရှုံ့လိုက်ရပြီး လရည်မထွက်အောင် ထိန်းထားရသည်။ “မင်း .. သန့်တာတော့ သန့်တယ် နော် ..” “အာ .. သန့်တယ် မမ .. ဒါပေမယ့် မမ အဆင်မပြေရင် ကျနော့်ဆီမှာ ကွန်ဒုံးရှိတယ်” “ဒါဆို ယူလိုက်လေ .. ဘာလုပ်နေတာလဲ .. မြန်မြန်လုပ် … အချိန်မရှိဘူး” “ဟုတ် .. ဟုတ် .. မမ .. လာ .. လာပြီ” ဇွဲတစ်ယောက် ကမန်းကတမ်း ကြမ်းပြင်ပေါ်ပုံနေသော ဘောင်းဘီကို ပြေးကောက်၊ အိတ်ထဲက ပိုက်ဆံအိတ်ကို ထုတ်၊ အိတ်အလယ်ခေါင်က ဇစ်ကို ဖွင့်ပြီး တစ်ခုထဲသာ ကျန်နေသည့် ကွန်ဒုံးကို မြန်မြန်ထုတ်ယူရသည်။ ကွန်ဒုံးအိတ်ထောင့်ကို ပါးစပ်နှင့်ကိုက်ကာ ဆွဲဖောက်လိုက်ပြီး အစွန်းစထွက်လာသော အကြည်ပြားလေးကို လီးထိပ်တွင်စွပ်ကာ လိပ်ချလိုက်သည်။
“နေဦး !! .. ကင်မရာနဲ့ ချိန်ရိုက်ထားဖို့ မမေ့နဲ့ဦး” ကွန်ဒုံးစွပ်ပြီးသည်နှင့် သူမနားသို့ ပြေးကပ်တော့မလို ဖြစ်နေသည့် ဇွဲအား နန်းယမုံ လှမ်းသတိပေးရသည်။ သူမ သတိပေးလို့သာ တော်တော့သည်။ အခုအချိန်တွင် ဇွဲ စိတ်ထား၌ ကင်မရာရိုက်ကူးဖို့ ကိစ္စ လုံးဝရှိမနေပါ။ စားပွဲစွန်း၌လက်ထောက်ကာ နေရာယူထားသဖြင့် လုံးဝန်းပြီးထွက်နေသော ပန်းသီးပုံစံဟု တင်စားခေါ်ဝေါ်ရမည့် တင်သားဖွေးဖွေးကြီး နှစ်ဖက်ကသာ ကြီးစိုးထားသည်။ “ရပြီ .. မမ” ကင်မရာကို ခပ်လှမ်းလှမ်းရှိ အလှစိုက် ပန်းအိုးပေါ်တွင် သွားပြေးတင်ပြီးနောက် နန်းယမုံ ဖင်ပေးထားရာနေရာသို့ ဇွဲ ရောက်လာသည်။ လှန်တင်ထားသော ဒရက်စ်(ဝတ်စုံ)စ လိပ်ကာ ဖုံးနေသည့် ခါးကျင်ကျင်လေးကို ဇွဲ လက်တစ်ဖက်နှင့် ဆုပ်ကိုင်ရင်း၊ နောက်တစ်ဖက်က လီးတန်ကို ထိန်းကာ စောက်ဖုတ်ဝတွင် တေ့လိုက်သည်။ နန်းယမုံကလည်း အလိုက်သင့်ပင် တင်ပါးကို ကော့ကာ ကုန်းပေးထားသည် ဖြစ်ရာ အရည်ကြည်စို့နေသော အဝလေးနှင့် ကွန်ဒုံးစွပ်ထားသော ဇွဲ၏ လီးထိပ်တေ့မိသည်။
ဇွဲ သုံးလေ့ရှိသော ကွန်ဒုံးက လု ပါသော အမျိုးအစားမို့ ရှည်ရှည်ဝေးဝေး တွေးမနေတော့ပါ။ နေရာမှန်သည်ကို သိသည်နှင့် ဖိကာ သွင်းပစ်လိုက်သည်။ (အားပါးပါး .. ကျပ်လှချည်လား) “အီး … အင့် … အင့်” (နန်းယမုံ ကိုယ်ကလေး ဆတ်ခနဲတုန်၍ ခေါင်းမော့ကာ မျက်လုံးတွေ မှေးစင်းကျသည်) “ဒီမှာ ဘော့စ် .. ခင်ဗျားကြီးတွေ့ပြီ မှတ်လား … ကျုပ်လုပ်နေတာ ဘယ်သူလဲဆိုတာ .. တွေ့တယ်ဟုတ် .. အဲဒါ ခင်ဗျား သစ္စာမရှိဘဲ ပစ်ထားတဲ့ မိန်းမလေ … ဟုတ်ပြီလား” ကြီးမားတုတ်ခိုင်သောလီးကြီးက သူမကိုယ်တွင်းသို့ အဖုတ်ဝမှတဆင့် ပြည့်ကျပ်စွာ ဝင်လာမှုကြောင့် မျက်တောင်လေးများ မှေးစင်းကျသွားသူ နန်းယမုံ .. ဇောင့်ကြွားကြွားလေသံနှင့် လှမ်းပြောနေသူ ဇွဲ၏ စကားများကြောင့် ခြံခုန်တဲ့လင်ဖြစ်သူကို မကျေနပ်သည့်စိတ်တွေ ပြန်ထလာပြီး သူမတင်ပါးတွေကို နောက်သို့ တွန်းပို့ပစ်လိုက်သည်။
ဇွဲနှုတ်ဖျားမှ ကျေနပ်အားရစွာ ညည်းသံနှင့်အတူ လီးကြီးက ကျဉ်းကျပ်နေသော လမ်းကြောင်းတလျှောက် ပြေးဝင်သည်။ ဇွဲ၏ ဆီးစပ်နှင့် ဖြူဖွေးအိစက်သော တင်ပါးကြီးတစ်စုံ ထိကပ်သွားသည်။ “အိုး .. ရှစ် .. ကောင်းတယ်” စူးစူးရှရှအော်ပြီး ကျေနပ်အားရသံအပြည့်နှင့် ရေရွတ်လိုက်သည့် နန်းယမုံစကားကြောင့် ဇွဲပင် အံ့အားသင့်ပြီး အဖုတ်ထဲအပြည့်ဝင်နေသော လီးကြီးအား ဘာမှမလုပ်ဘဲ ငြိမ်နေမိသည်။ ဇွဲကသာ ထိုသို့ ငြိမ်နေပေမယ့် နန်းယမုံကတော့ ငြိမ်နေခြင်း မရှိပါ။ သူမဖင်ကြီးတွေက တုန်ခါနေပြီး၊ အဖုတ်အတွင်းသားတွေကမူ ဇွဲ၏ လီးကို ပတ်ကာရစ်ဆွဲနေကြသည်။ “လိုး .. လိုးလေ .. ဇွဲ .. မမ ကို လိုး .. ဖက်ခ် မီ .. ပလိစ် !!” သူ့ယောက်ျား စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်အောင်ပဲ နန်းယမုံ တမင်ပြောနေတာလား၊ ဒါမှမဟုတ် သူ့လီးကြောင့်ပဲ ဆန္ဒတွေ တက်ကြွလို့ လိုးခိုင်းတာလား ဇွဲ သေချာဝေခွဲမရပါ။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီအချက်တွေအား ဇွဲ ဂရုစိုက်မနေတော့ပါ။
လုံးဝန်းသလောက် တင်းရင်းအိစက်နေသည့် တင်ပါးကြီးနှစ်ဖက်ကို ဆုပ်ကာဆွဲကိုင်ပြီး အားကုန်ကို လိုးတော့သည်။ လီးက စောက်ဖုတ်အတွင်းသားတွေကို ပွတ်တိုက်ပြီး ထွက်လာလိုက်၊ ဝင်သွားလိုက် ဖြစ်နေသည်။ တဖြောင်းဖြောင်းနှင့် ပြေးလွှားနေသော ပစ်စတင်ချောင်းနှင့်တောင် တူလှပေသည်။ နန်းယမုံ တင်သားတွေက တကယ်ကို ဖြူဖွေးကားစွင့်ကာ လုံးဝန်းလှသည်။ နောက်ကနေ ဒေါ့ဂီစတိုင်လ်နှင့် လိုးနေရသူ ဇွဲအဖို့ ဆောင့်ချက်တိုင်း တင်သားတွေ တုန်တက်သွားသည့် မြင်ကွင်း၊ အရည်ကြည်တွေ စိုနေသော လီးကြီး အဖုတ်ထဲ ပျောက်ကွယ်သွားသည့် မြင်ကွင်း၊ အဆီရယ်လို့ မရှိဘဲ ကျော့ရှင်းနေသော ကျောပြင်ထက်တွင် ဆံနွယ်လေးတွေ လှုပ်ခါသွားသည့်မြင်ကွင်း .. ရမ္မက်ကြွဖွယ်ရာ မြင်ကွင်းပေါင်း မျိုးစုံကို မြင်နေရသည်။
သို့သော် ထိုအရာများထက် ပို၍ သူ့စိတ်ကို ဖမ်းစားထားသည်က လီးအဝင်အထွက်ကို မြင်အောင် ဆိုပြီး ဖင်သားနှစ်ဖက်ကို လက်နှင့်ဆုပ်ကိုင်ပြီး ဆွဲဖြဲထားမှုကြောင့် ထင်ထင်ရှားရှားပေါ်နေသော စအိုပေါက် နီနီစူစူလေး။ နန်းယမုံသည် သူမကိုယ်သူမ ဂရုတစိုက်နှင့် အမြဲကျော့ရှင်းနေအောင် ပြင်ဆင်ထားလို့လား မသိ။ အဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားတွေရော ဖင်ကြား ၊ စအိုပေါက် ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ရော အားလုံးက အမွှေးအမှင်ကင်းပြီး ဖြူဖွေးသန့်စင်နေသည်။ အဖုတ်ကို အပီအပြင် ဆောင့်လိုးနေရင်းမှ ဇွဲတစ်ယောက် ဖင်ချချင်လာသည်။ နန်းယမုံကို ချရဖို့ အရေးက ဒီတစ်သက် ပြန်ရချင်မှ ရတော့မည်ဖြစ်ရာ ကြုံကြိုက်တုန်း ရှိရှိသမျှ အပေါက်အကုန်ဖွင့်လိုက်ချင်သည်။ “အင်း … အင့် .. မမ ကောင်းလာပြီ .. ဇွဲ .. ဆောင့် .. နာနာဆောင့်” ကာမရမ္မက်ဇောတက်ကာ နန်းယမုံတစ်ယောက် အပီအပြင် ပေါက်ကွဲထွက်နေသည်။
မိမိယောက်ျားမဟုတ်တဲ့ ငယ်ရွယ်နုပျိုတဲ့ ယောက်ျားသားတစ်ဦးက လီးကြီးကြီးနှင့် လိုးပေးတာ ခံနေရသည်မို့ ခံစားမှုအရှိန်ကလည်း ခါတိုင်းနှင့် မတူ။ တစ်သက်တာတွင် မကြုံဘူးသေးသည့် အတွေ့အကြုံနှင့် အကြီးအကျယ် ပြီးတော့ဖို့ နန်းယမုံ တဲတဲလေးသာ လိုတော့သည်။ “အင် .. အာ .. ဘာဖြစ်လို့ ဆွဲထုတ်လိုက်တာလဲ .. ဇွဲ” အရမ်းကြီး ကောင်းနေသည့် အချိန်တွင် အဖုတ်ထဲမှ လီးဆွဲထုတ်ခံရသဖြင့် မဲ့တဲ့တဲ့ မျက်နှာလေးနှင့် နန်းယမုံ လှည့်ကြည့်ကာ မေးရှာသည်။ စားပွဲစွန်းအား ထောက်ထားသည့် လက်ဖြင့် လီးတန်ကြီးအား လှမ်းဆွဲမည်တောင် ပြုသည်။ ဇွဲကာ အဆွဲမခံဘဲ နောက်သို့ ခြေတစ်လှမ်းဆုတ်သည်။ တင်ပါးကြီး တစ်ဖက်ကို ကိုင်ထားသော လက်ကိုမူ စအိုပေါက်လေးပေါ် ရွှေ့ပြီး လက်မနှင့် စူတူတူအဝလေးကို ဖိထိုးချသည်။ “မမ ယောက်ျားက မမဖင်ကို လုပ်ဖူးလား” “အိုး .. နိုး .. မလုပ်ဘူး .. မလုပ်ဖူးဘူး” နန်းယမုံ၏ စအိုပေါက်လေးက တင်းရင်းနေသော်လည်း ဇွဲက လက်မကို အားနှင့်ဖိချလိုက်သည်မို့ ထိပ်ပိုင်းလောက် ဝင်သွားသည်။
ချွေးသီးလေးတွေ စို့နေပြီ ဖြစ်သော နန်းယမုံကိုယ်ကလေး ဆတ်ခနဲ တုန်သွားပြီး လီးကို လှမ်းဆွဲသောလက်ကို ကမန်းကတမ်း စားပွဲပေါ်သို့ ပြန်ထောက်လိုက်ရသည်။ ဖင်ပေါက်နုနုလေးထဲသို့ ဝင်သွားသော သူ့လက်မကို အသာလေး လှုပ်ပေးရင်း ကင်မရာတင်ထားရာဘက်သို့ ဇွဲ လှမ်းကြည့်ကာ စပ်ဖြီးဖြီးရုပ်နှင့် ပြောသည်။ “ကဲ .. ဘော့စ် .. ဒီတစ်ခါတော့ နောက်ဆုံးပိတ်အဖြစ် ခင်ဗျားကြီး တခါမှ မရောက်ဘူးတဲ့နေရာကို ကျနော့်လီးရောက်အောင် သွားလိုက်မယ် .. ဘယ်နေရာလဲဆိုတာ လက်မကို မြင်တယ် မှတ်လား .. မမနန်းယမုံရဲ့ ဗါဂျင်ဖင်ပေါက်လေးပေါ့ဗျာ .. ဟား ဟား” ဇွဲပြောနေသည့် စကားလုံးတိုင်းကို နန်းယမုံ ကြားပါသည်။ ယောက်ျားဖြစ်သူ၏ အလုပ်သမားက သူဌေးကတော်ဖြစ်သူ သူမကို ဖင်ချဖို့ ကြံစည်နေသည်ဆိုတာ နန်းယမုံ နားလည်ပါသည်။
သို့သော် အခုအခြေအနေတွင် သူမ ငြင်းဆန်ချင်စိတ်တစ်ခုမှ မရှိတော့ပါ။ အလျှံညီးညီး တောက်လောင်နေသည့် ရမ္မက်စိတ်တွင်၊ ဖောက်ပြန်သူ ယောက်ျားအပေါ် ခံပြင်းဒေါသထွက်မှုက ပေါင်းစပ်လိုက်သောအခါ သူမလုပ်သမျှ အမှန်ဟု နန်းယမုံ ထင်မြင်နေသည်။ ဖင်မကလို့ ဘာကြီးပဲချချ .. ဇွဲ လုပ်ချင်တာလုပ်ဖို့ သူမ သဘောတူသည်။
“လုပ် .. ဇွဲ .. မမ ဖင်ပေါက်က မင်းအတွက်ပဲ .. ဒါမှ ဒင်းတို့ ကောင်းကောင်းမှတ်မှာ” ဖင်ပေါက်ထဲသို့ ဝင်နေပြီ ဖြစ်သော လက်မပေါ်သို့ ထွီခနဲ နေအောင် တံတွေးထွေးချလိုက်သည်။ လက်မကို နှဲ့ပြီး လှုပ်ပေးလိုက်ရာ တံတွေးများ စိမ့်ဝင်လာသည်။ ဖင်ဝလေးက အေးခနဲ ဖြစ်သွားသည်။ နန်းယမုံ စအိုဝလေးအား အလိုလို ကျုံ့မိသည်။ “မမ .. စိတ်လျှော့ထား .. ဖင်ဝကို အရမ်းတင်းမထားနဲ့ ဟုတ်ပြီလား ..” “အင်း .. ဇွဲ .. ဖြေးဖြေးနော်” “ဟုတ် .. မမ” တံတွေးအကူအညီရော၊ ရွှဲရွှဲစိုနေသော အဖုတ်ထဲမှ ထွက်သည့် စောက်ရည်ကြည်များ၏ အကူအညီရော ပေါင်းကာ ပြင်ဆင်ပြီးနောက် လီးထိပ်ဖူးဝကို သေချာတေ့သည်။
တအားကို ဖိသွင်းပစ်လိုက်ချင်သည့် စိတ်က များနေပေမယ့်၊ နောက်ပေါက်ကို ဆက်ဆံသည်မှာ နန်းယမုံအတွက် ပထမဦးဆုံး အကြိမ်ဆိုတာ ဇွဲ သိပါသည်။ သို့အတွက်ကြောင့် အဖုတ်ပေါက်ထက် များစွာသေးငယ်သော စအိုပေါက်ထဲသို့ သူ့လီးဒစ် ဝင်နိုင်ဖို့ အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုးစားသည်။ အားအရှိန်ကို ၁%လောက်မှစ၍ တစ်ကြိမ်လျှင် ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းလောက် ထပ်ကာ တိုးတိုးသွားသည်။ ရာခိုင်နှုန်း တစ်ရာပြည့်ဖို့တော့ မစောင့်လိုက်ရပါ။ နန်းယမုံက စိတ်ကိုလျှော့ပြီး ဖင်ပေါက်ကို ဖွင့်ထားပေးရာ ၇၀% ကျော်ကျော်လောက်တွင် လီးဒစ်ဖူးက အထဲသို့ မြုပ်ဝင်သွားသည်။
“အား … ကျွတ် … ကျွတ် ..” “ရှစ် .. အရမ်းကျပ်တာပဲ မမ .. သိပ်ကောင်းတယ် .. ဆိုးဂွတ်” တစ်ယောက်က နာလို့ ညည်းတာဖြစ်ပြီး၊ တစ်ယောက်ကတော့ ကောင်းလွန်းလို့ ညည်းတာဖြစ်သည်။ နာတာတော့ နာနေပေမယ့် နန်းယမုံ ရုန်းကန်ပြီး ထွက်သည်တော့ မလုပ်ပါ။ စားပွဲစွန်းကိုသာ လက်နှစ်ဖက်နှင့် တင်းတင်းဆုပ်ကိုင်ထားရာ သူမ၏ လက်ဆစ်လေးများသည် အားပြုထားရသည့်အရှိန်နှင့် အဖြူရောင်တောင် သမ်းလာနေရှာသည်။
“မမ .. ဆက်သွင်းမယ်နော် .. ခန အောင့်ခံထား” အပြစ်အနာအဆာဆိုလို့ အမည်းစက်တစ်စက်တောင် မရှိသည့် ဖြူနုဖွေးအိနေသော တင်ပါးကြီးနှစ်ဖက်အား ပေါင်းစပ်ထားသည့် စအိုပေါက်နုနုလေးအား သူ့လီးကြီးက ထိုးခွဲကာ ဝင်ရောက်နေသည့် မြင်ကွင်းသည် ဇွဲအတွက်တော့ ၂၀၁၅အတွက် ကြည့်အကောင်းဆုံးသော မြင်ကွင်းသာဖြစ်သည်။ ချော့သွင်းလိုက်၊ ခနရပ်ထားလိုက်၊ အားစိုက်ကာ ထပ်ဖိထည့်လိုက်နှင့် အချိန်မည်မျှ ကုန်သွားမှန်း မသိ။ တော်တော့တော်သေးသည်။ စောစောတုန်းက ပြီးချင်သလို ဖြစ်နေသော ဇွဲ .. ဖင်ပေါက်ထဲ လီးဝင်အောင် ကြိုးစားနေရသဖြင့် ပြီးချင်စိတ်က နည်းနည်းပျောက်သွားသည်။
လီးအရင်းပိုင်းနှင့် တင်ပါးဝိုင်းဝိုင်းကြီးတွေ ထိဖို့ နဲနဲလေးသာ လိုတော့သည်အချိန်တွင် ဇွဲ ခနနားလိုက်သည်။ “မမ အဆင်ပြေလား ..” “တစ်ဆို့ဆို့ကြီးနဲ့ .. နေရထိုင်ရတာတော့ တမျိုးကြီးပဲ” “ဒါက အစမှတ်လို့ပါ .. လီးအဝင်အထွက်ဖြစ်ရင် အဆင်ပြေသွားမှာ .. မမ ဆွေမျိုးမေ့သွားရစေမယ် .. ဟီး .. ဟီး” “ဆွေမျိုးမမေ့လည်း မင်းဘော့စ်ကို မေ့ရင် ရပြီ .. ဆောင့်တော့ကွာ” “စိတ်ချ .. မမ” (လာပြီ) ဆိုပြီး အချက်ပေးသံအဆုံး၌ ဇွဲ သူ့လီးကို ပြန်ဆွဲထုတ်၍ အားနှင့်တစ်ချက် ဆောင့်သွင်းလိုက်သည်။ ကျပ်သည်ကတော့ တကယ်ကို ပြုတ်တူနှင့် ညှပ်ထားသလား ထင်ရသည်။
သို့သော် ထိုပြုတ်တူသည် နူးညံ့လွန်းသော ကတ္တီပါသားနှင့် အလားသဏ္ဌာန် တူနေပါသည်။ တစ်ချက်ချင်း ဖြေးညင်းစွာ ပြန်ထုတ်လိုက်၊ အားနှင့်ဆောင့်သွင်းလိုက်နှင့် အပျိုရည်ပျက်ခါစ ဖင်ပေါက်လေးကို စိတ်တိုင်းကျ လိုးဆောင့်နေသည်။ သူ့ဆောင့်လိုက်တိုင်း ဖင်ဆုံကြီး လှုပ်ခါသွားပြီး စအိုပေါက်လေးကတော့ အစွမ်းကုန်ကို ပြဲလန်လို့နေသည်။ “အင်း … အာ့ .. ဇွဲ .. အား … အာ့ .. ဇွဲ … လုပ် .. လုပ် … အာ့” အသွင်းအထုတ်မှန်လာသည်နှင့်အမျှ နန်းယမုံ၏ ဖင်ပေါက်လေးသည် ဇွဲ၏ လီးကို ကောင်းကောင်းလက်ခံလာနိုင်သည်။ နာသေးတာတော့ နာနေသေးပေမယ့် ထိုနာတာနှင့်တွဲ၍ ရရှိလာသော ခံစားမှုဖီလင်ကို မက်မောခုံမင်လာသည်။ ဇွဲ၏ ဆောင့်ချက်နှင့်ညီညီ သူမတင်ပါးကို ကော့ကော့၍ ပေးသည်။
ဇွဲကလည်း နန်းယမုံတစ်ယောက် ဖင်အလိုးခံရတာ ဇိမ်တွေ့လာပြီဆိုသည်ကို နားလည်သည့်အလျောက် အလျှော့မပေးတော့ဘဲ လီးကို ဆောင့်ချက်ပြင်းပြင်းများ သုံးကာ လိုးသည်။ “အိုး … ရက်စ် … ဆောင့် … အာ့ .. အား .. မမ ပြီးတော့မယ် … ပြီး … ပြီးပြီ ..” “အား .. ဖက်ခ် … ထွက် .. ထွက်ပြီ” နန်းယမုံ၏ ဖင်ပေါက်ရော၊ အဖုတ်ရော ရှုံ့ပွရှုံ့ပွဖြစ်ကာ အကြီးအကျယ် ပြီးသွားသလို၊ ဇွဲလည်းပဲ ဖင်သားတွေ ကျုံ့ကာတုန်ဝင်သွားသည် အထိ အကောင်းကြီးကောင်းပြီး လရည်တွေ ပန်းထုတ်မိသည်။ တကိုယ်လုံးရှိ အားအင်တွေ နန်းယမုံ ဖင်ပေါက်လေးထဲ စီးဝင်သွားသလို ခံစားရသည်။ “အရမ်းကောင်းတာပဲ မမ ရယ် ..” နောက်ဘက်နားရှိ ထိုင်ခုံပေါ်သို့ ခြေပစ်လက်ပစ် ထိုင်ကာ ကျသွားရင်း ဇွဲတစ်ယောက် မောပန်းသံနှင့် ပြောရှာသည်။ နန်းယမုံကလည်း အသက်ကို မှန်မှန်ဖြစ်အောင် တဟင်းဟင်းနှင့် ရှူနေရင်းမှ သူ့ကို လှမ်းကြည့်ရင်း ယဲ့ယဲ့လေး ပြုံးပြသည်။
“မမလည်း အရမ်းကောင်းသွားတယ် .. ဇွဲ” “……” ဘာပြောရမှန်း မသိဘဲ ဇွဲ ငြိမ်နေစဉ်မှာပင် နန်းယမုံက အံ့သြဖွယ်ရာ အပြုအမူတစ်ခုကို ပြုလုပ်လိုက်သည်။ ဇွဲ ရှေ့တွင် ဒူးထောက်ကာ ထိုင်လိုက်ပြီး အခုထက်ထိ မချွတ်ရသေးသော ကွန်ဒုံးကို လိပ်ကာ ချွတ်ယူလိုက်သည်။ လရည်တွေ ပြည့်နေသော ကွန်ဒုံးကို လက်ဖဝါးပေါ်တွင်ကာ ခနကြည့်ပြီးနောက် မူနွဲ့နွဲ့နှင့် ပြုံးပြသည်။ ထို့နောက်တွင် ချွဲကျိကျိဖြစ်ကာ ကျန်ခဲ့သော သူ့လိင်တန်အား လက်နှင့်စုပ်ကိုင်ပြီး အပေါ်အောက် လျှာနှင့် လျက်ပေးသည်။ ဇွဲတစ်ယောက် ထိုင်နေရာမှ ဖင်ကြီး ကြွမတက်အောင်ပင် မနည်း သတိထားနေလိုက်ရသည်။
စိတ်ကျေနပ်သည်အထိ လျက်ပြီးသွားလို့ နန်းယမုံက နောက်ဆုံးပိတ်အနေနှင့် သူ့လီးထိပ်အား ပြွတ်ခနဲနေအောင် နှုတ်ခမ်းလေးနှင့် နမ်းပြီး လွှတ်ပေးလိုက်သည်တွင် ဇွဲ၏ လီးက ပြန်၍တင်းမာစတောင် ပြုနေသည်။ “အိုကေ .. ဒီလောက်ဆို ကင်မရာကို ပိတ်လိုက်လို့ရပြီ .. မမတို့ ဟိုသစ္စာဖောက်နှစ်ယောက်ကို တုံ့ပြန်လက်စားချေဖို့ ကောင်းကောင်းကြီးလုံလောက်နေပြီ ထင်တယ် .. သေချာတယ် ဒင်းတို့တော့ မမတို့ကို ဂျဲလက်စ်ဖြစ်ယုံမက ဒါတွေမြင်ရင် ဆွေ့ဆွေ့ခုန်အောင် ဒေါသထွက်နေကြမှာ ..” ဒေါ်နန်းယမုံက တက်ကြွစွာ ပြောနေသလောက် ဇွဲကတော့ ပြုံးဖြီးဖြီးနှင့် ခေါင်းညိတ်ပြယုံသာ တတ်နိုင်တော့သည်။
အခု ရိုက်ကူးထားသည့် ဓါတ်ပုံတွေနှင့် ဗွီဒီယိုကို ဦးမိုးလုံးဟိန်း မြင်လျှင် သေချာတာကတော့ သူအလုပ်ပြုတ်မှာ ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် သူပြုလုပ်ခဲ့သည့် ကိစ္စမှန်သမျှကို ပြန်စဉ်းစားကြည့်လျှင် ဇွဲအနေနှင့် အလုပ်ပြုတ်မည့်ကိစ္စအား လုံးလုံးကို ခေါင်းထဲထည့်မနေတော့ပါ။ ဘော့စ်ဖြစ်သူ ကတိပေး ပြောထားခဲ့သည့် လကုန်လျှင်ရမည့် ဘောနပ်စ်ကိုလည်း မလိုချင်တော့ပါ။ ဦးမိုးလုံးဟိန်းက ပေးမည့်ဘောနပ်စ်ထက်သာသည့် အကျိုးအမြတ်ကို သူ့ရဲ့အရမ်းကိုဆက်ဆီကျပြီး၊ အရမ်းကို လှပသည့် မိန်းမဖြစ်သူထံမှ ရရှိခဲ့သည် မဟုတ်ပါလား …ပြီးပါပြီ။
Categorized as အငျးဆကျ Tagged အကြိုးအမွတျ